blog — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Fiiri video ee Sweet Victory ka album ugu dambeeyay Trip ee, Kaca
"Trip ee ku qoran buug aan u malaynayaa in qof kasta oo dhalinyaro u baahan yahay in uu akhriyo. Uu rabitaankiisa Ciise iyo qarnigan yimaado iyada oo cod weyn oo cad bogga kasta. Ma sugi karo si ay u arkaan saameynta fariin this ayaa qarni in gaajaysan ujeeddo "-. Lecrae, Grammy abaal marinta- guusha @lecrae artist "Kac waa buug cajiib ah in qabsatay qalbiga dhaqankeena. Isla markii aan soo gaaray waxaan aan hoos u gelin kara. Trip adag si aad u REAL, oo aad muujinaysaa sida aad nolosha ku nool yihiin sida qof weyn oo da 'yar ee adduunka maanta. akhrin Great "-. Sam aan, NFL linebacker, @thesamacho bani'aadamnimada "Trip ayaa qoray buug waxaan jeclaan lahaa in aan dhahnaa akhriyi lahaa markii aan da'da yaraa. uu hamiday, xigmad, iyo rabitaan in aad ka doodid jiilka ka yar waxa ay markhaati u shuqulkii Ilaah samaynaya iyada oo Trip iyo shaqada uu nagu samayn karaa oo dhan iyada oo loo marayo "-. Kirk Franklin, abaalmarinta Grammy- guusha iyo multi-platina @kirkfranklin duubo artist "waan jeclaaday Kac reading. Marar badan kitaabkan aniga qudhaydu waxaan helay Medi- tating ka badan bogagga dib markii aan u akhriyo. Waxaa i dhiirri galiyay, waxyiga, iyo loolan jidka oo dhan iyada oo loo marayo. Dhaqanka naga filaysaa in waqti laakiin Ilaah baabba '...
buug cusub safarka ee, Kaca, waa hadda! Read Hordhac John Piper ee buugga hoos ku qoran. Waxaad ka hor-si kara kitaabka iyo ogaato wax badan oo at Risebook.tv Mid ka mid ah waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan jeclahay oo ku saabsan Trip Lee iyo buug uu qoray, Kaca, waa xidhiidhka ka mid ah maamuustaan, iyo ku tacaluqa. Ujeedada ugu habboonaanshaha in dhaqanka American waa caadi. Cool waa xoojisay. Sida Mack Stiles ayaa sheegay in, Masiixiyiinta badankood adduunka waa ka cabsan feedh ka soo kiciyey; Americans ka cabsan suni ka soo kiciyey. Waxaa loola jeedaa ma nihin kuwa qabow. Ma khusayso. Laakiin ujeedadu at maamuustaan, waa dhif. Maamuusi dareensan jir. Waxa uu dareensan yahay unexciting. Waxa aan ku qaboojiyo. Lakiin qof walba waa ogyahay, hoos u qoto dheer, in markii maamuustaan ​​tagaa, oo dhan ee nolosha aadanaha noqdo show kala duwan. khafiif. gabbashada. gacmeed. caaga. faaruqa. Dhamaadka, tarayn. Waxaan la dhigay in ka. "Cool waa yeelsiiyeen, oo aan ku noolaan kartaa waa "erayo -Madaxa Trip Lee. Sida xaqiiqda ah. Isku dayga in ay ku noolaadaan oo kaliya in ay noqon qabow, oo kaliya in ay noqon khuseeya, waa yar yahay. Markaasaa cod Trip Lee ee ooyaa, Kaca! Waxaa jira wax badan oo dheeraad ah si ay u arkaan, in la ogaado, kalgacayl, inay ku raaxaystaan. Waxaa jira xaqiiqooyin in ay yihiin sidaas u weyn oo ay aan la yarayn karaa si xiiso leh. Ereyada "oo xiiso leh" "Qaraxa" "kubada" "Xisbiga" dhawaajin doqon ah ...
Hey guys! My Kac buugga waxaa lagu sii daayo on January 27 (todobaadka soo socda!) oo waxaan u baahanahay kaalmadaada. Waxaan raadineyso weeyna dadka ka caawin kartaa qayb ka mid ah Kooxda Street ahaan iyo caawin noo faafin erayga ku saabsan buugga online oo ay warbaahinta bulshada. Waxaad ka eegi kartaa badan oo ku saabsan buugga at http://My salaadda RiseBook.tv waa in Ilaah qaadan doonaa kitaabkan oo ay isticmaalaan ay fariin si ay uga hortagaan guud si aad u hesho ilaa iyo ku nooshahay. Oo waxaad naga caawin kartaa faafin fariin in ay kor u saxiixay in ay qayb ka mid ah Kooxda Street our buug noqon. Halkan sida ay u shaqeyn doonaan ... 1 - Codso HALKAN. Noo sheeg dheeraad ah oo adiga kugu saabsan, sababta aad u rabto in aad qayb ka mid ah kooxda ahaan, oo aad la wadaagto warbaahinta bulshada iyo links kale online nala. My publisher dib u eegi doona codsigaaga iyo haddii doortay ... 2 - Read nuqul dardaaranka kitaabka. Waxay kuu soo diri doonaa nuqul PDF kitaabka ah in uu akhriyo. 3 - Ku biir ah Facebook Group gaarka ah. Waxaad ka heli doontaa martiqaad si ay ugu biiraan a Facebook Group gaarka ah ka publisher. Waxaa, waxaad heli doontaa tan ah ee content u weyn in la wadaag saaxiibadaada. Waxaa jira...
Waxaan ciyaaray basketball Iyi dugsiga sare. Taasi waa hadal aad u run (haddii aad i xoogin si ay u qeexaan play erayga). Waxaan ka qeyb galay dugsiga yar ee gaarka loo leeyahay, iyo haddii aad sare ah aad heshay rigoore ah oo ku saabsan kooxda ku Iyi. Waan jeclahay ciyaarta kubbadda kolayga, laakiin wax badan ka wanaagsan at Daawasho ka ciyaaro ayaan ahay. Waan edbinayaa karaan ciyaartoyda iyo guuxi "C'mon!"At garsoorayaasha oo dhan-star xirfad. Laakiin in alla intii tagaa. My dugsiga lahaa xeerka la yaab leh oo ku saabsan this dhab isboortiga ciyaaro si ay u qalin jabiyaan, in kastoo, sidaa darteed waa inaan lagu qasbay ilaa habboon iyo madaxana ii sudhan yihiin in ceeb habeen walba Friday. tarabuunka ayaa had iyo jeer ahaayeen buuxda kulan. waalidiinta iyo ardayda ku faraxsan-badan oo iyaga ka mid ah saaxiibada mine- ilaa tusay si ay u taageeraan kooxda. Waxaa wax laga xumaado, waxay u badan tahay in lagu sameeyo sida ugu badan ee kala duwan yihiin in ciyaarta sida aan ku sameeyey. Waxaan jeclaan lahaa jaleecada galay biliij ah waqti ka waqti, ka yaabban wixii dadkii oo dhan la fikirka, gaar ahaan aabbe ii. Waxaan qabaa inuu ogaaday in labada naga mid ah oo kaliya waxaa jiray si uu u daawado, laakiin waxaan ku dhacday in ay kursiga ka wanaagsan. Marka keliya ee aan si dhab ah u sameeyey dhulka ahayd ee ...
Kac Book soo xigsaday: 7:00 A.M. Logic
Waxaan ahaa shan iyo toban sannadood jirtay iyo intii aan nolosha la geddisan jeestay. My name iyo muuqaalka lahaa hadduusan beddelmin, laakiin wax walba oo kale igu saabsan lahaa. Waxaan ahaa qof aad u kala duwan ka badan waxaan lahaa sanad ama laba ka hor. Waxaan ula jeedaa ma sida marka dadku kulliyad iyo tagaan naftooda dib-u-abuuro la naanays cusub iyo shakhsiyaad; Waxaan ula jeedaa wax weyn baxeen gudaha iga. Waxaan noqday Christian a. Waxaan dareemay cusub. Waxaan dareemay nool. Waxaan dareemay in si wanaagsan aan lahaa in ay ku dhawaaqdo in qof kasta oo wax maqli lahaa, gaar ahaan saaxiibaday dhow oo qoyska. Qof kasta oo ka jawaabay duwan in isbedelka ku dhacay ii-qaar ka mid farxad, dadka kale la iska caabin-laakiin waa isku wada hadalka ayaa mar walba taagnaa ii. Waxaan ahaa nin waayeel ah kan aan si weyn u ixtiraamo hadlaya, faraxsanahay in aan u sharaxno qorshe kulankeygii iigu waayo, Ilaah lagu maamuusayo la nololeed, si gaar ah aan Ehelkeedu galmada. Waxaan isku dayay in ay is dejiyaan oo ku saabsan, laakiin waxa ay mar walba ahayd adag tahay in la qaban aan farax in. Sida erayada -Brazil oo carrabkayga ka xawaaro ah adaanaha, Waxaan ka helay dareenka ah in uusan sidii ugu faraxsanahay sida aan ahaa. Wuxuuna doonayay inuu aamusnaan dhagaysan, laakiin uu wajiga ku jawaabay oo uu ka hor ...
Halkan waxaa ku qoran oo dhan lyrics ee Kac album studio shanaad Trip ee. Riix horyaalka song si aad u aragto lyrics ee track kasta. Ku raaxayso oo saaxiib la wadaagto! 1. Kaca 2. Lights On 3. Shweet 4. Manolo ft. Lecrae 5. Waxaad Ma Garanayo 6. All kac Up (Selaah) 7. All kac Up 8. Life Beautiful 2 (Mine) 9. Insomniac ft. Andy Mineo 10. Wax cusub 11. Laasaros ft. This'l 12. All My Love ft. Natalie Lauren 13. Waxaan ahay tagtay 14. Sweet Victory ft. Dmitri McDowell iyo Lee'ah Smith
Hook: (Dmitri) Waxaan dareemayaa qodxan halkaas oo taajka aan ahaa waxaan noqon doonaa mid daciif ah laakiin From ciidda nool waxaan ahay ilaa waagu haa waxaan ku noolaan doonaa sababta aan u helay Sweet Victory Qofna waxa ay iga qaadan kartaa Sababta guul Sweet waxaan ka helay, guul macaan haa Verse 1: Waxaad arki ii dhaawac , Waan ogahay inaad i arka dhaawac Waxaad ma sheegi kartaa on CD, kuwaas oo, laakiin Bro waxaan ahay jilibka qoto dheer waxa ku jira aan dhiiqo in itaaldarradayda, wuxuu igu tiirsan lahaa aan la been dhex ilkahayga in la yidhaahdo anigu ma aan caraysan ha Xataa sidii aan ku qori kuwaas khadadka waxaan u dhow ilmadaydii jidhkaaga oo aan la shaqeeyo xaq toddoba sannadood ahay i seegi la sameeyey "sii aad garka kor isku day in aad iftiimisid "Bruh waxaan ahay lix iyo labaatan, waa waxaan dareemayaa fiican by mile ah hay oo dhan anecdotes iyo xigashooyin cute waxaan mari doonaa on beeley for rajo run, uu aad u daroogada Hook Post Hook: Rooti in Boqorku, farxiya saqafka Dareen wanaagsan aan gon 'inay ka sameeyaan si guul ku dhameysatay Sweet Waxaad i maqal, holla haddii aad i dareento Waxaan weli xitaa socda in kastoo aannu dhaawac Sababta guul Sweet waxaan ku guuleystay, haa aad ogtahay waxaan ku guuleystay in kastoo aan aan winded ...
Verse 1: Waa wax aan maanka ku samayn aad heshay daqiiqad? swag madbacad, Waxaan iska dul waxaan ku jiray silsilado iyo daal waxaa ka mid ah ayaan ahay (qaylada baabuurta) Waan ogahay waxaad maqli Taayirada kuwaas oo ku xoqeen ayay screeching hoos wadada, TGS cararo waxaan shirqoolka aan baxsado, Waxaan this maalinta 'Sababta aan addoommo maleynayo inuu been daacad isku dayay inaan lacag la'aan ah, laakiin ma ahayn aqoon Hel em sare, heli em sare, heli em Novacane sare jidhkayga, ma aan dareemayo been Waxay sheegeen in aan cusbada ahay oo waxay canbaareen karaa Laakiin waxaan oy la qalo, ma sugi karo in uu dhicistii Ka hor inta aadan ka taahnaa,, iyo dadka aan hadayana aan la hadlayo xumad khasaare ah arooryadow sheeg, aad u ogaato qaldan ayuu waan ogahay inaad laguma soo rogeen inay burburto telefoonka Ma qalad haddii aan jabsada ee song ah? Hook: Waan maqli doonaa waxa aad ku leh, laakiin Anigu ma aaminsani in aad 'Sababta aad kaliya la jiifa, oo aanan aad u baahan tahay waxaan ka helay Rabbiga cusub, Waan ogahay waan idin ma arko Laakiin waxaan xaq u arkaan in aad iyada oo, si aan isdhaafsi aad ka tagto (Ku celi 2x) Verse 2: Immisa jeer baan TGS sheeg ...
Intro: (Natalie) Waxaan arkaa in aad daawashada Ma jeceshahay waxa aad aragto? Anigu ma waxaan ahay farmuuqay? Well, sorta kinda laga yaabaa Muxuu aad maskaxda ku haysaa? Wejigaaga u muuqataa yaqaan ayaan idin arki waqtiga oo dhan Oo waxaan kaa badbaaadin karaa caawa shirkadda Waxaad aan TGS sheeg cidna ma aha cid kale ku dhawaad ​​daawashada Haa kaliya hadal dheh iyo Xuquuqda halkan aad u helay, hadda Verse 1: Jay ahaa cidlo Waxaana uu haatan raadinaya jacayl on shabaqa Nin leeyahay baahi, waxa aad ka filan? Wuxuu eegay iyada oo pages ay dhammaan Oo markuu iyada wuxuu ka helay nin uu waayay neefta Cause waxay ahayd jacayl la arko marka hore markii ay ku kulmeen Qalbigiisu wuxuu u adag garaaceen Waxay ahayd kinda iftiin hasyo, indho u eg ayuu u jeclaa iyaga lama dagaallami karaa dareen marka ay kugu dhuftay this adag Waa masaafo dheer, si uu iyada la online mar kasta uu shaqada, laakiin gabar this on isaga oo maanka ku waqtiga oo dhan wuxuu Ma sugi karo inaan arko, iyadu helay iyaga igu dhuftay muuqaalada markay wada uu waxba kama qabo uu TGS lacagta la Visa homies uu uga digay "hoos u dhigi aan naag waxaad buuxin kartaa" Laakiin waxa uu kulan ee jacaylka ma uu samayn ...
Verse 1: subaxdii qabriga wanaagsan Boy waxaan hopped waan la hurda muddo dheer aan hamaansigga Qof walba hadlaya isku dayaya in ay i arki, gaalnimo Like sida uu neefsanayo? Wuxuu ahaa lix feet Boy qoto dheer waxa aad leh? Ku hay ilaa afkaaga xidhay nin dhintay holla ma karo, waxa aad hadalka xumad? "Sababta mar albaabka in aan ku dul baxay Laakiin ha i ay dib kuu celiyaan Wakhtiga aan sanduuq hadda Ooh ogahay inaad ku udgoonsado in Sababta hawada waxaan u ahaa in qabriga muddo dheer aan ku Dhaaranin Dadka qaylinaya waxaan la la'yahay, war bixinta tacsi ah loo qoray wajiga My cirro, iyagu ma ay sheegi kartaa wiil oo ku saabsan in la sara kacay Close rabrabtii, wac Wacdiyuhu, ayuu si tegey Waa ka weyn ma jirto cid isaga ka gaari karin, odhan dheer Laakiin qaban, ka hor inta aadan u qayliya, oo ay maamusho bixi waxaan maqlay qof soo socda, oo wuxuu ku yidhi wax qaylada, "ka soo baxay" Pre-Hook: ilaa Hopped baxay qabriga, subax wanaagsan ayaan la hurda muddo dheer aan hamaansigga Waxay ii aasay suud madow, kulanka madow waan noolahay oo waan soo toosay raadinaya Sidaas duuli hadda ka Hook: Hadda waxa laga bilaabo waxaad ii Laasaros wici kartaa hadda ka dib aad i soo wici kartaa Laasaros From ...
Intro / muunad: Sug, kor ha igu qaataan mid kale (Ku celi 4X) Verse: Boy aad ogtahay waxaan iyaga u helay J ee, iyaga rock cagahayga Caught kor craze ku saabsan, my armaajo aan la soo buuxi Waad og waxaan iyaga ku helay 5 iyo waxaan iyaga 12 ayaa helay Laakiin waxaad iyaga ku garanaysaan 1 ee Xaqiiqdii waxaan doonayay waa on sale Sidaas qasabno laba badan oo ku saabsan goobta, ilaa aan dareemayaa kaliya xaq u Bruh waxaan TGS sii ciyaarta sneaker aan dhagan Haddii qof walba oo iyaga ka helay homie in aan wixii aan jeclaan Hadda doonayaa inaan qof walba ha iga halkii Mike sida My qabatinka ma aha haweenka ama Sneakerheads mashquulo ah si qarsoodi ah, Waxaan cuncun for kabaha qaar Dhig on my card, Anigu ma aan wax u helay in ay Mararka qaarkood lumin Waxaan la yaabanahay waxa ay tahay doonayaa in aan cadeeyo Sababta aan wan't wax cusub Maxaan helay ma samayn doonaa waxaan qabaa waxaan ka helay qaar ka mid ah kinda Sababta flu qabatimi Waxaan ahay in cusub Waxaa helay aniga oo kale Outro / muunad: Haa waxaa i helay sida hay ilaa, kor ha igu qaataan mid kale (Ku celi 4X)
Verse 1: Waxaan doonayaa inaan maanta Tani keliya toogtay My nolosha laga yaabo maanta Haa qalbigayga stop Haddii aan ka baxo caawa waxaan doonayaa inaan ka soo on top waan ku siinayaa nolosha oo dhan, tanu ma aha waxaan ka helay Yessir haatan sugi waxaan daqiiqadii bruh ah oo dhan arki y'all oo aad gacmihiinna ku ruxid Sugitaanka sare oo garaaca in in uu iska saaro, 808'S heegan Marka aan neefsado Rash waxaan idinku leeyahay statements aan dhulkiisa taagan gon eegmo marka garaaca dhibic in, Schalke ku baryayaaye, i aan xadhig off ha Waxaan dareemi, Waxaan dareemi, Waxaan dareemayaa aad u wanaagsan sida aan ahay bahal Like bakhtiyo ah oo ay dhab surta Sidaas waxaan ku socday oo ku saabsan doonaa waxaan la nasasiiyay marka aan joogo Kac jiheysteen iyo sicir- waxa aan ahay on Bruh in sababta waxaan qoray gabay ah Caawa waxaan doonayaa inaan sida My taako nolosha kaliya socdaa habeenkii oo dhan Haddii aan ayan ka soo toosin ha subaxda soo fuul, bruh aan gon noqon digniin Tuur hagaagi dabaysha u sii daa aan xumad si No hoos gaabis tago, waxaan gon guuleysan No hoos, inaynu naqaan isaga ku faana Pre-jillaab: Caawa waxaan halis doonaa oo dhan in ay raacaan Oo ku nooshahay sida noloshayda ee ...
Intro: Oh, Waan ku jeclahay, haa Like kale ma jiro, haa Marka aan arko aad iftiimisid aad iftiimiyo sida xagaaga, haa Verse 1: Waad og tahay dareen in markii iyaga erayada ku guuldareystaan ​​Waa adag tahay in sheego waxa aan doonayaa inaan u sheego Si igu mini, aan nin yar Lagu hadlaya hadal ilmahaaga, Anigu garan maayo waxa aad la leh Laakiin waa music in aan dhegahayga ku maqlayaa, inkastoo bap Boom in aad abo marka aan joogo meel u dhow in kastoo Ani aad saaray iyaga oo ku polos iyo skinnies Curly duurjoogta iyo dibba, aad noqon xaashidan badan leer ah in kastoo Waxaad heshay in swag kid isku qasan iyaga on Raadinta sida aad mama iyo aabe iyaga on toosan baxay maxalka aad waxaa dhab cusub waxaan si adag u qayshadeen ilaa aan lama laha illin ka tagay Tan iyo markaas aad sii dhoola on my Musaaricadu wejiga iyo cayaar, duurjoogta ah ee Fiiri meesha waan ogahay magacayga aad heshay Laakiin waxaan doonayaa xiran nool, waayo, warkiisuna, Waan ku jeclahay Hook: Oh, Waan ku jeclahay Like kale ma jiro Marka aan arko aad iftiimisid aad iftiimiyo sida xagaaga My aragti cad ma noqon karo lahayn ma jirin Sababta aad tahay qurux badan, waa layaabna ma leh waan ku jeclahay Ma aan akhriyi karo ...
Sample: Haddii aynu wada kaca, oh haa oh haa (celiyaan) Verse 1: Waan ogahay anigu ma istaahilo inay taabtaan Bro ku codbaahiyaha Laakiin shuqulkan waa wax aan diriri lahaayeen, waayo, waan ahay ee shaybaadhka qalin iyo suuf og waxaan ku dhameysan laga yaabaa in la soo dhaafay, oo aan runtii waa sababta aan dib ugu soo qori go thoughLet ee Wakhtiga '04 oo aan kula kulmay 116, si deg deg ah ayaan ahaa on board Fast weeraryahanka afar sano, waxaan on safar Oo waxaannu aan la garan waxa uu lahaa dukaanka Laakiinse haatan halkan waxaan waa toban sano ka dib, qulqulka helay Bonds weyn helay dhow, oo lagu daray waxa ay neceb ka badan wuxuu ku yidhi waxaan uun u qaban waayo, cajiinka, laakiin waxay naga ma jebin doono 'Sababta Rabbiga waannu u adeegi la socodka, isagu waa nimco miidhan, oo sidaas daraaddeed Oo haddii ay i weydiin sababta aan sidaas u sameeyo waxaan u sheegi iyaga waa music ee dhaqdhaqaaq Haa waxaan ku hadla, waayo, markabka unashamed Taasi weligood taabto marxalad laakiin ay dhex marayay inuu cusaybka kac Pre Hook: kaca oo dhan upThat noqon lahaa riyo Waa in dhammaan kaca Siiya O taagan Jidka boqorkii uu wanaagsan Oh haa ah Haddii aan, oh haa Oh haa,...
Intro / muunad: maalmood Qaar ka mid ah waxaan dareemayaa si dhow Maalmo waxa ay u muuqataa ilaa iyo haatan Hubaal wanaag iyo naxariis, had iyo jeer raaci doonaan, mana soo laaban madhan yahay, oh Halleeluuya isagoo ammaantaada ugu sareeya waxaan siin doonnaa in aad maalmood farxad leh oo dhan ayaan waxa aan rajaynayaa in nolol dhan oo aan u gudbiyo in aan eray walba oo macnaheedu, Ooh Xitaa shar ila Ciise, Oh Ciise, My Ciise, in sababta waan ku jeclahay sidaas Verse 1: Boy Waxaan dareemayaa sida inaan majiire Running inaan ka dhigo in doorashada hubi, Obama Biden (aad u hesho?) Maalin kasta waxaan homiciding Dilkii gool kulaad in igu dhex, mararka qaar waa traumatizing (ma aha waxa ay?) Laakiin Bro ma ahan la yaab leh si ay ii keentaa farxad marka waan xajiyaa eraygiisa ayaan balanqaad fuushan waxaan idiin ballanqaadayaa aan lagu waxa shalayno marka aan aan u hoggaansan aan soo gaadhay, laakiin waxaan ahay isaga in Erayo: Waxaan ahay qarinaya dareema waxaan ka helay god ka mid ah waxay ku tuureen hadh, laakiin waxaan soo dhexmuuqday sababta waan ogahay Wiilka dareema Waxaan ku riyoonayaa indhaha furan, maskaxda aan sabayn majiire by kacda samada, daruur 9 in dabaasha aan badda ee in lakabka Lakabka Allena Hey aan barareyso Laakiin wuxuu dab in Nuuri hoos aan ka danbeeya waxaan ahay sigaarka ma karaan ...
Hook: Waan samayn waayo, waxay kor u Got in hubka qufulan oo ku raran waxaan aan la hadlayaan gubi ma Flip page a, Waxaan qarxi doonaa Gartay qol ah Manolo (nolo) Manolo (nolo) Manolo (nolo) Manolo (Ku celi 2x) Verse 1 (Trip): Isku dayga in ay u sheegaan wiilasha aan marnaba ka tagi Sababta keliya sariirta ayaan mid ka mid ah aan gaariga xajisaan oo waxaan ka helay laba guriga Waxay noocyada kala duwan, laakiin waxay isku wax ku laayeen Double, foosto double, bang bang Waxaan halkan u jeeda dawacooyin, Waxaan aan ka bixin maskaxdayda Waxay soo socda naftayda, sidaas darteed waa xumad wakhtigaas been Them ay isku dayayaan in ay i dilaan, haddii aadan i rumaysan Anigu ma jecli, Anigu ma jecli, Anigu taas ma qaadan kartaa fudud aan flipping page a, Waxaan ahay keeb-faraxsan clip ah oo eeg waxa Taabashada, garaacid marxalad aad Hit Xaq, ay weedh kasta oo uu u Gooyo ii qoto dheer waxaan ahay quusidda, Waxaan ahay quusin Markii aan kortaan waxaan ka helay dab dab in, Waxaan soo noolaaday Hook Verse 2 (Lecrae): Manolo Manolo, Waxaan halkan socday boostada ila wadaajiseen inaan u badiyay, my mama qabaa inaan ahay haysa in kastoo aan u sii haysanayo jabkii dhabta dhow, aad u ogaato waxa ay si buuxda u ...
Hook: aad u hesho gacmaha hawada yar sanqadh Samee taribuunka haddii aad halkaas ku faana on Godman haddii aad dhicin, oo kaliya haddii aad ku dhici Si loo shweet lahaa Maxaa dhacaya haddii marka aad faana waxa aan ahaa 'xumad dharka la tags ah? In la shweet lahaa Maxaa dhacaya haddii marka aad ku faana in ay ahayd isaga xumad oo ay ugu horeysay oo la soo dhaafay? In la shweet lahaa Post Hook: Oo iyaga waxaan ku maqlay hadalka sida ay nin Qof kulul helay iyaga soo iishaqay, on Fiiri falkaas aan necbahay in ay u sheegaan ma ay wanaagsan tahay ka wanaagsan heli dallada a, Ilaah wuxuu u taliyaa Verse 1: Aan dib ugu time tag tiris ah daahay D magaalada hoos ayaa i soo qaban, in meesha ay iga dhigay Markii aan dib waxaa ahay, Waxaan ma aha Veca-ing (vacationing) Dareensan sida aan ahay guriga, fekerayo joogi, Waxaan aan la sii joogo in kastoo Ooh horeba horay Lone gobolka xiddiga rijeynaya, sidee baan u illoobin yaabaa Laakiin waxaan aan la arbushin ilaa baxay buluug Waa duuli sida uu ii xidhantay, Waxaan aan la hadlaya xumad kabaha u, biqil waxaan ka helay wax badan oo dhibaato ah, balse waxaan si toos ah, taasi shweet waan ogahay, Ilaahayow iyaga u rogrogmadaan doonaa badda, in uu shweet intee jeer baan ku TGS kuu sheegi ...
Intro / muunad Oh oh, nuurka Annagu garan mayno halka aan u socday (celiyaan) Verse 1: Bal eeg hareeraha waa dhan madow, oo dhan walba madow Like March million ninka, laakiin aan la hadlayo xumad Quluubta wax walba Dark, nafihii mugdiga ah maskaxda Dark qoraal qulqulka madow waxaan kastoo heli karaa in yar oo iftiin ah? Ma in aan wax u dagaalami karin? Hey aan si indha la garan mayno On jid inaannu tagno tag xawaaraha buuxa ka hor, duulaya laakiin waxaan hooseeyo Laakiin garan mayno waxa uu helay in dukaanka, mar dambe ka dhicin, waayo, doke okie ku Nope, ayuu inoo siin karaa inaannu hortiisa, waayo, waxyaalaha marnaba aan arkay ka hor 'Ilaa iftiinka u hesho in ay dhuxul, garan mayno halka aan u socday Laakiin ma jiro map google u ah nolosha, waana sida laydhkaaga waa Caddayn jabay: waxaan biligleynaya, gudbinta khasnad qaar ka mid ah in ay dahabka Waayo, qaar ka mid ah nickel iyo copper, isku dayayaan si aad u hesho ammaan in la soo xaday Oo gurto wixii aan beero Hey aynu wada helay riyooyin, tani waa inaan ku tukanayeen oo uu ku dhajisan doonaa biiro iyo iftiin anigaa iska leh, kids waa indha la 'Waan ognahay in aad u helay, Rabbiga waannu og nahay inaad helay oo kaliya aad noo sare qaadan kartaa, aad Lights pilot fadlan Waxaan Hook ...
Hook: Maanta maalin marka aynu dhan kici My barroosinka uu si tegey ila soo jeeda Wadajir nool iman waxaan ka dhanka ah been gubanaya taagan Haddaba aan helay baal waxaan diyaar u ahay kac, waxaan oo dhan ku kici Oh oh oh Waxaan oo dhan u kaca Oh oh oh Maanta Verse maalin Kac ah 1: Ku hay ilaa inaan soo laabtay ku faano xadiidka, kuwaas oo sida aan waalan at em ahay, gadaal laga yaabaa mics dharbaaxay Ha maskaxda ku hayaan aan marnaba ka tagay waxaan ahay Crore Dhegayso kor kugu habboon aan la TGS i weydiiso labo jeer aan halkaan joogo, Waxaan halkaan u joogaa inaan ku faana isaga sida aan caan ku Inkasta oo dadka waawayn kuurin ahay tag, waayo, Ilaahayow ma aha hiddo ma, 'Dhabta ah waa inuu ka, ayuu dhab Haddaba mawduuca dhow dahay waan ogahay naqshadeeye, uu ka badan yahay duuliye u duulaya ilaa daruuraha ayuu loogu talagalay oo gacmihiisa ayaan qoraal ahaan kuu sheegi nolosha ay tani tahay flash ah oo digsi lagu Sidee ahay fariisto marka aynu u baahanno Cryer ah inaad noo sheegto inay kor u kacaan oo taagan? Hubi yo qorshaynaysa My dude, qabriga oo aan ahayn gurigaaga Sababta ayaad jidka dhulka hoostiisa aad u dheer Lix qoto dheer leh taariikh aad dhagax Dhammaan waxay dhihi,...
soo saaray: Gawvi Vocals dheeraad ah by: J. Paul farshaxanka by: Alex Medina Mixed iyo baasana by: Jacob "Biz" Morris Verse 1: Ha doonayaa inaan qofna ma maqlaan our xanuun Taas sida aan dareemayo marka aan flipping dhex iyaga Twitter comments, Waxaan dareemayaa oo dhan roob Waxay sheegaysa i heli badan waa jir ah alaabtii Taasi mar dambe ma jiraan laakiin aan wici run markaan eego jidadka kuwaas Sidaas awgeed waxa dhabta ah markii la moodaa sidii wax coulda ii ahayd Hook: Man waxaan kuu sheegi kara sida aan xaq u dareemayaa haatan Ah ay doonayaa inaan ogaado sida aan hadda dareemayaan Waxaan dareemayaa sida ay coulda ii ahayd waxaan dareemayaa sida ay coulda ii ahayd waxaan oo dhan laga sameeyay ekaanshaha Ilaah ee aad ogtahay macno All nolosheena, himiladeena waa xoogan Waxaan dareemayaa xanuun sababta aan halkaan joogay ka hor inta Yaa ka aan waxba galabsan, Anigu garan maayo, laakiin waxa coulda ii ahayd waxaan dareemayaa sida ay coulda Verse ii ahayd 2: Anigu ma aan aqoonin Mike Brown waxaan aan la ogaan Trayvon Anigu ma aan aqoonin Sean Bell Laakiin waan ogahay way ka baxeen oo aan aan la ogaan Oscar Grant ama Tamir Rice Anigu ma aan aqoonin Eric Garner Laakiin waxaan ay u ogaadaan nolosha Ma ka qiimo badan ay ka badan ...
Coulda Me Ma u-
Qalbigaygu waa culus yahay. Waan ogahay, Ilaah waa u roon yahay, iyo in uu gacanta ku, laakiinse qalbigaygu waa culus yahay. Todobaadkii hore ka dib dhacdooyinka ee Ferguson (iyo jawaabaha waa in ay warbaahinta bulshada), Waxaan dareemay culays loo qoro gabay. My goolka ahaa in aan wax statements grand ama caddayn, laakiin si ay u muujiyaan hab ah in wax walba oo i dareensiisay. Sidaas Waxaan bilaabay qoraal, oo waxanuna waa waxa ka soo baxay. dareenka ah in celiyay in aan maanka ku jiray: "Waxa aan ii jirey ayaa laga yaabaa." Waxaan post a oo dhan diyaar ku saabsan sida Masiixiyiintu waa jawaab jeer sidan oo kale ahi, laakiin ka dib markii warka ku saabsan Eric Garner shalay, Waxaan go'aansaday inaan sugnaa oo aan post in ka dib. Hadda, Waxaan kaliya doonayaa in la sheego in aan qabo qalbi culus. ma xiiso doodaha ama dood Waxaan ahay hadda. Waxaan kaliya doonayaa inaan xor u yahay inuu muujiyo waxyeelladayda. Waxaan waxyeelo sababtoo ah in Eric Garner video waxaa ba'an si ay u daawadaan. Marka aniga iyo xaaskeyga waan ugu horeysay waxaa daawaday bilood ka hor, annaga qayliyey. Life waa hadiyad qurux badan, waana inkaa si ay u daawadaan nolosha in ka tago qof ee jidhka - gaar ahaan marka uu qaaday by dadka kale. waxaan u maleeyay, "Sida xaqiiqada ah dadku ma sheegi karo ...
My buug cusub, Kaca, soo baxa 27-kii January! Waxaa laga heli doonaa meel kasta oo buugaagta waxaa lagu gadaa. Waxaad ka hor-si kara hadda iyo booqo bogga internetka ee buugga at Risebook.tv. Waan ku baryayaaye, Rabbiga u isticmaali doonaa si loo dhiiri aan jiilka si aad u hesho ilaa iyo ku nooshahay. Daawo trailer kor ku xusan oo ka akhrisan sharaxaad kooban ee buugga hoos ku qoran: Society ayaa sheegay in dhalinyarada waa waqti ay welwel la'aan is-qowlka, laakiin Trip Lee ayaa sheegay in Ilaah waxa uu ugu yeedhay qof walba in ay ku kici ka hurdaan, kor ku xusan laga filayo hooseeyo, iyo in ay ku noolaadaan, waayo, King ayaa Ciise sara kacay. Duniduna waxay inoo sheegayaa in sanadaha hore waa in la irresponsibly riyaaqay halkii hibeeyeen ilaa ay raad macno leh. Waxaan u sheegay in mas'uuliyad iyo ballan waa culaabta dib loo dhigo ilaa inta suurtogalka ah. Oo sidaas daraaddeed, ugu naga mid ah ku qaataan yaraantayadii iyo xaalad murugo hurudda-hurda ee nolosha ilaa aan lagu qasbay in ay u hesho ilaa. Dhibaatada waxa ay tahay in nolol ayaa durbaba bilaabay. Waxaa hadda ka dhacaya. Oo Ilaah wuxuu adiga ku baaqay in ay u nool yihiin. In kitaabkan awood, Trip Lee doodaysaa waxa la joogaa wakhtigii si toos ah iyo sara kaco, in ay ku noolaadaan sida aanu u abuurmeen in ay ku noolaadaan. Young ama jirka, ayaan waxaan loo yeedhay in ay ku noolaadaan isaga, waayo,. Haatan. Mu'miniinta Young ka fool ah ...
Raaxaysan farshaxanka aad soo arkay, waayo, album ugu dambeeyay Trip ee, Kaca? Markaas qabsoomayn wallpaper shweet this for telefoonka si aad u yeelan kartaa in aad la mar walba. Download iPhone Waraaq-
Maxaad ku guuleysatay eg? Ma dheer ama gaaban? Madow ama caddaan? Strong ama daciif ah? Waxaan u maleynayaa in ay ku xiran tahay waxa aan ula jeeddaan u- "guusha." Waxaan la nuugo galay sheekada ka mid ah ku guuleystay bishan la soo dhaafay sida a akhriyo dheer ah, laakiin Biography mashquuliya Michael Jordan ee. account faahfaahsan I xusuusiyay sababta jaceeylka dadka badan ee isaga la xuduud on geesi cibaadada. wax badan ayaa laga odhan karaa oo ku saabsan "uu airness" laakiin qofna weligiis sheegan karto in uu ku guuleystay aan. Ma wuxuu u eg yahay guusha ka hor inta uu helay oo dhan kuwa siddo horyaalka, in kastoo? Sida aad kitaabka ku akhriyey, Sidaa darteed anigana waxaa cad ka caruurnimadiisii ​​in uu noqon lahaa kooxda heysata horyaalka a. Haddii in uu ahaa ciyaar aad u fiican sida ashuun horyaalka yar ama sida Roombo Iyi yar a; uu shahawada dugsiga sare ama uu ciyaarta ku guuleystay shot sano Freshman uu la UNC inta lagu guda jiro. By markii ugu waxaan ka helay in cutub ku saabsan horyaalka uu sida Chicago Bull a, waxaa jiray wax kadis ah ma. qoraaga ayaa u sheegay in uu sheekada hab u cadeeyay: Jordan uu u dhashay inuu guusha a. Iyo in waxa inaynu naqaan isaga, waayo,: ku guuleystay lix siddo horyaalka, shan MVPs, iyo 14 All ...
lamaane A bilood ka hor waxaan la yaabay qof walba by dhawaaqay brand album cusub, "Kac." Waxaad ma fahmin sida ay u adag waxa uu ahaa in ay sii xasilloon oo ku saabsan ka hor inta aan qoraalka iyo dadweynaha ayaan tegey,. album ayaa laga shaqeynayay muddo ka badan sannad, oo anna ma aan sugi karin in qof walba u sheegno - gaar ahaan kuwa weydiinaya markii aan hoos wax cusub lagu hayaa. Jawaabta ilaa iyo haatan ayaa si qoto dheer yididiilo. Waxaan ahay yaabeen in qof ayaa sii waday in ay i taageeraan, inkastoo aan la quruxsan xasilloon ee labadii sano ee la soo dhaafay. Your jacayl iyo farax ayaa anigaa kordhay oo kaliya. Hawlgabka Early Mid ka mid ah jawaabaha aan lama yaabin by ahaa this mid ka mid ah: "Sug, Waxaan u maleeyay in aad ka fariistay?"Tani waa su'aal ah in inta i raacda agagaarka sida hoos sii libdhaya. Waxaan u hadlay wareysiyo, Twitter, iyo tiirarka blog, laakiin waxaan ogahay in ay weli caddeyn in qaar ka mid ah. Ha i sii wadaan in ay isku dayaan in ay si toos ah u dhigay rikoor: Waxaan marnaba ka fariistay. In 2012, Waxaan ku dhawaaqday in aan noqon lahaa "sarre ka music iska." Haa, Waan ogahay in codadka ka fariistay-nin, laakiin waxaan ula kac ah uma isticmaali eraygiisii. Waan xajiyey waxaa si ula kac ah aan caddayn waayo, ma aan ahaa 100% hubin waxa uu u ekaan lahaa sida. Aan ogayn ...
Ma u baahan tahay xusuusin maalinle ah in aad la dhisay si ay ku faana? Waxaan isugu a wallpapers yar aad telefoonka, kiniin, ama desktop. Waxaa jira saddex doorasho fudud hoose la logo faana ee. Waxaa jira in ka badan in mar dambe soo. Ku raaxayso! Download iPhone Waraaq • Download iPad Waraaq • Download Desktop Waraaq Download iPhone Waraaq • Download iPad Waraaq • Download Desktop Waraaq Download iPhone Waraaq • Download iPad Waraaq • Download Desktop Waraaq-
noloshayda oo dhan, Waxaan soo maray xilli ciyaareed marka aan la ahaantii dhiiriyo in ay ka shaqeeyaan. Marka waxaan ku jiray dugsiga sare, waxaan kaliya rabay in aan buff ku filan inuu soo jiito gabdhaha (waxaan ku guuldareysatay). In bilood ka hor arooska waxaan isku dayay in ay ka shaqeeyaan jidhkayga xeebta Malabka. Maalmahan, Waxaan kaliya isku dayaya si loo hubiyo in aan ku noolahay ee la soo dhaafay labaataneeyada aan. waxa riixaya My beddeleen sanadihii la soo dhaafay, laakiin waxa uusan waxba iska badalin waa sida yeelsiiyeen riixaya kuwa. Waxaa laga yaabaa in aad tahay qof si dabiici ah soo afjaray in ay ka shaqeeyaan-qaylo ka soo baxday inay saaxiibaday kii boostada PIC iyo videos ee mudada tababarka maalin kasta. Laakiin haddii aad tahay qof aniga oo kale ah, waxa riixaya aad kor iyo hoos tagaan sida orgi kasta oo yar on boodboodo ah. Maxaa dhacaya haddii natiijada ka soo baxday shaqada weligiis socday, in kastoo? aad noqon lahaa dheeraad ah oo ku dhisan? Shaqo adag bixiyaa Off lagu guda jiro Olympics Winter ee bishii la soo dhaafay waxaan ku jiray ka baqeen sida aan daawaday hillaac bobsledders degdeg ah oo snowboarders highflying. Waxaan la yaabey sida ay heer sare isboortiga, laakiinse waxaan jiray xitaa ka badan dhicin markii aan u maleeyay oo ku saabsan tababarka edbiyo waa ka qaaday inay halkaas ka heli. Dhamaadka dhacdo kasta marka ciyaartoyda guul ku guuleystay ayaa istaagay ...
Music waa qayb weyn oo noloshayda ka waxaan mar walba ka fekeri ku saabsan sida loo isticmaalo fiican. Waa igu adkaatay in aan ku raaxaysan tahay oo aan la falanqeeyo, qaadashada qoraalada, iyo su'aalo weydiinaya. Beyoncé leeyahay dareenka qarankeena hadda iyo iyada oo si cad mid ka mid ah xiddigaha naga pop ugu jecel yahay. marwada koowaad ee xitaa sheegay in haddii ay noqon kartaa qof kasta oo kale, iyadu ma doonayo in uu noqon Beyoncé. Beyoncé waa caan ka badan ayay ka waligoodba, sidaa darteed ma waxaad u tagi kartaa on TV ama heli online aan wax arkay, oo ku saabsan, ka dib u eegista ah iyada album cusub si sawirro iyada ku socotid waddo la gabadheeda. Waxaan soo jiitay by iyada talanti oo u waxyoonay by iyada drive, laakiin waxaan sidoo kale yaabay waxyaabo aan arko. Beyoncé iyo waxaan samayn leeyihiin dhawr waxyaalood ee caadiga ah. labadaba ka Texas Waxaan nahay, oo waxay leeyihiin badan oo qoyska ee Houston. Waxaan nahay labada farshaxan oo badan sii daayay ku dhawaad ​​tiro la mid ah albums Solo (in kastoo ay kaliya wax yar oo dheeraad ah si fiican u yaqaan oo aan aniga ahayn). Oo danbaynti, nahay labada dembilayaasha u baahan nimcada Ilaah ee. Iyadoo taas maskaxda, haddii aan fursad u helay inuu la kulmo lahaa iyada kuwani waa qaar ka mid ah su'aalaha laga yaabo in wax baan ku weyddiisanayaa, qaar ka mid ah ...
Waxaan jecel hadlayaan doonista Ilaah ee nolosheena, xitaa marka qof ku raacsanayn ila ku saabsan. Wada hadaladii ka heli kartaa dhabta ah waqti dhab ah oo degdeg ah inkasta oo-gaar ahaan marka aan la hadlayo ku saabsan arrimaha lagu muransan yahay. Waa marnaba xiiso inaad u sheegto qof in aad u malaynayso in ay khalad tahay. Sidaas daraaddeed waxaan isku dayaan in ay taxaddar leh erayadayda, oo si fudud u tilmaamo wixii uu Ilaah ku yidhi, halkii fikradaha aniga ii gaar ah. Like clockwork, in kastoo, barta qaar ka mid ah inta lagu guda jiro wadahadalka, waxay jiid doonaa kaarka buunka: "Laakiin ma Kitaabka Quduuska ah ayaa sidoo kale aan ku odhan xukumi? Waxaad ku haboon u boodboodeen badan aayadda in, huh?"Waa ma baajiyo. In Matthew 7 Ciise wuxuu ku yidhi, "Cidna ha xukumina, ama aad la xukumi doonaa. "Xitaa kuwa naga mid ah oo badan weligiin akhriyin Kitaabka Quduuska ah soo qaadan karaa oo qayb ka ah eraygiisa khudbada erayga. Tani waxay noqon kartaa ugu aayadda Bible ugu fiican u yaqaan in maanta. Oo waxaa sidoo kale laga yaabaa in qalad laga fahmay ugu soo aayaddan waxaa loola jeedaa waxaan fahmi sida aan u malaynay in midkiinba midka kale jeclaado. Haddaba waxaa muhiim ah in aan ku weydiino su'aasha: Muxuu Ciise macnaheedu markii uu inoo sheegayaa in aan la xukumi? Maxaa wuxuu miyuusan Dhigan Isbuucii lasoo dhaafay, aniga iyo xaaskeyga waan qayb-galay siminaarka guur at our kaniisadda. Sida aan ...
Waa maxay sababta aan Guursaday White Girl a
Mar kasta oo aan boostada sawirada qoyskeyga on warbaahinta bulshada, jawaabaha had iyo jeer waa mid xiiso leh. The ugu caansan waa, "Wiilkaagu waa si qurxoon!"Ama" Maxaa qoyska u qurux badan!"Laakiin mid ka mid ah jawaabaha kale ee caadiga ah waa, "Ma naagtaada cad?"Dadka mararka qaarkood aad i weydiiso at shows. Jawaabtu waa haa. Xaaskeyga waa isku dhafka ah ee Hungarian, Talyaani, iyo Polish-oo ay dadka intooda badan oo kaliya ka dhigan tahay haa, iyada oo cad. Tani waa ku tacaluqda in qaar ka mid ah, laakiin naxdin leh ama xataa niyad jab dadka kale. Uma maleynayo qof waa in la yaabay ama niyad by guurka interracial, laakiin weli waxaan doonayay in ay ka hadlaan sababta aan guursaday baxsan aan "tartanka. Go'aanka ah in ka soo jeeda qowmiyadaha kala duwan guursado qof uusan ahayn mid adag ii. Weligay fadhiistay oo ku qoray baxay a faa'iidada iyo khasaaraha liiska. In kastoo, haddii aan ku sameeyey, xaqiiqda ah in xaaskeyga ayaa Weligay ma arkin dhacdo ah "Martin" noqon lahaa ee category con ah. Laakiin daacad ah, Anigu ma aan rafaad farabadan dul ama taladooda ku saabsan in ay ahayd OK. Waxaan ahaa qanacsanahay in ay naagtuna waxay ahayd mid aan wax guursan, inkastoo iyadu ma ahaa madow. Qaar ka mid ah marna ka fiirsan doono inuu u guursanayeen oo qof kale oo aan ahaa qowmiyadda la mid ah ...
post Guest ka Jessica Barefield ha igu bilaabi by siinta Afeef a. article Tani ma aha oo ku saabsan sida warbaahinta bulshada xun. Waxaa loo adeegsaday in si dhexdhexaad ah, iyadoo qaab wadnaha xaq u, waxay noqon kartaa wax la yaab leh. dhibcood ee qodobkan waa inuu caddeeyo qaar ka mid ah siyaabaha ay warbaahinta bulshada noqon kartaa pitfall ah nolosha Christian iyo in ay kugu dhiirinaynaa in aad baari qalbigaaga marka ay timaado isticmaalka warbaahinta bulshada iyo ka qayb qaadashada. Kuwani waa shan siyaabo in warbaahinta bulshada quudin karo hawadooda noo dembi miidhan. 1. Warbaahinta Social dhumin kartaa waqti aad quraankani ma aha waxaan horey u maqlin, laakiin waxa mudan in cel-. Waxaanu xusuusiyay in Efesos 5:16-17 in maalmuhu shar bay leeyihiin, waana in aan ugu wanaagsan u isticmaasho waqtiga inoo siiyey. Ka fikir in mudo ah karin waxa aad la samaynayso halkii hubinta goobaha oo dhan. Inta ay sugeyso at ballan, waxaan samayn karin liiska dadka si ay u tukadaan oo ku saabsan phone, bixiyana kuwa daqiiqo oo dheeraad ah oo ku Tukan for our qoyska iyo saaxiibada. Dhab, hal mar ama mid kale, waxaanu wada nahay dambi ah faqri saacadood on Facebook maalin oo marna ilaa furitaanka hadalka ...
Maxaa miyuusan Me Dila
Marka aad dhaxjiraan wakhti adag, dadka mar walba ma garanaynin wuxuu ku jawaabo. Natiijadu waxay tahay beeley tarayn ama isku day in aad trite kalsoonaada,. Waxaan mar walba dhibaato la hadal haynta phrases- nooca in micnaheedu ma aha wax qofka ku yidhi iyo dhab ma caawin qofka dhegaysanaya. wax ka gubanayn sida, "Chin up" iyo "Waxaa heli doontaa si fiican." Si dhab ah? Sidee baad ku garanaysaa? Waxaad ha ku samaynina Nicmada saaxiibadaa by siinayo iyaga iftiimin, Rajadii qalafsaneyn in aan la rujin in wax. Marka hits xanuun oo qoto dheer waxaan u baahan nahay rock runta adag in ay na quudiso. Intii uu xumad kansarka, Christopher Hitchens ka hadlay sida niyad mid ah qaar ka mid ah weedho ka tarayn aan hareeraha tuur. Waxa uu ku qaato dhawr bog weerarka mid ka mid ah in uu buugga, dhimashada. Waxa uu sheegay in, "Khaas ahaan, Waxaan wax yar ka joojiyay bixinta ku dhawaaqay in 'wax alla wixii ay dilaan ma ii dhigaysa ii xoog. "" Waxa uu ku dhaco in la yidhaahdo, "In dunida caayaan jirka ... waxaa jira oo dhan wax aad u badan oo aad u gaysan karto, ha laydin dili, ka dibna aad ka tagto oo aad u tabardaran. "ma ahan oo keliya in aad dareento karaa farxadda? Waxay arrintu u muuqataa nixiyay, laakiin waxaan qabaa Hitchens waa la qumman yahay dareen. Waxa suurto gal ah in aan ...
Kasta oo hadda ka dibna waxaan ka hadli doonaa qof ku sheegay in ay doonayaan inay noqdaan Christian a, laakiin waxa ay u muuqdaan in ay u maleynayaa in waqtiga ma aha arrin sax ah. Markii aan iyaga sababta weydii, waxay ii sheegi ku saabsan oo dhan, iyagoo dembiyadooda, oo dhan of ceebaha ay, iyo dhammaan waxyaalaha waayey ilaa ay samaysay ee la soo dhaafay. Weligay kula murmina waxyaalaha Dambigooda Dartiis, laakiin waxaan samayn hardiyi dib on malahooda. Waxay tahay in loo maleeyo in dembi bartey aad istaagaya soo socda Masiixa, marka soo horjeeda saxda ah waa run. In dambiile ah inama sii Masiixa; waa sababta aan isaga u baahan tahay. Haddaynu sugno ilaa aynu eegno kaamil ah isagaana u qabsanaysaa aan doonaa weligiis sugaya. In mid ka mid ah xigasho oo aan jeclaa, Charles Spurgeon na ugu baaqay in ay joojiyaan raadinaya nafteena, iyo si ay u bilaabaan isha ku heysa inay Ciise. Waxa uu sheegay in: "The! Waxaad ku odhan, Anigu ma toobad ha ku filan. "Taasi waxa ay raadinaysaa naftaada si. 'Anigu ma aaminsani ku filan. "Taasi waxa ay raadinaysaa naftaada si. "Waxaan sidoo kale aan istaahilin ahay. 'Taas waxaa raadinaya naftaada si. Anigu ma ogaan karo,'Ayaa sheegay in kale, 'Aan xaqnimada wax. "Waa arrin sax ah in la yidhaahdo in aadan haysan wax xaqnimo; laakiin waa arrin khalad ah in la raadiyo ...
5 Words vs. 5 been
Sida aan ka soo jawaabin fariin ku xidhan tahay qofka waa ka. Aan idin siiyo tusaale. Oo haddii shisheeye kor u socda ayaa ii on wadada oo sheegay in, "Ha ii amaahan furaha gaariga dhabta deg deg ah. Waxaan rabaa in aan xoogaa lacag ah oo ka soo baxa sanduuqa gashi aad,"Malaha waxaan eegi doono isaga sida uu waali oo soco off. Laakiin haddii xaaskeyga ahaayeen in baa i soo gaadhay iyo wax la mid ah, Waxaan iyada siin lahaa furayaasha oo aan fikir labaad. Waxaan Dhegaystaan ​​waxna ka qabtaan si ka duwan iyadoo ku xiran yaa la hadlaya. Sidee ku saabsan hal-abuurey more. Haddii mid ka mid ah saaxiibadayda wanaagsan ku adkeystay in aan soo gudbiyo si uu awood kaamil ah ka badan noloshayda oo dhan, Waxaan u badan tahay eegi doono isaga sida uu waali iyo tag u hesho saaxiibo cusub qaar ka mid ah. Oo waxay noqon lahayd wanaagsan ii in ay ka jawaabaan hab in. Laakiin waxa haddii Ilaah laftiisa ayaa sheegay in wax aad u la mid ah? 2 Timothy 3:16 ayaa sheegay in, "Qorniin kastaa waa neef ilaahay." Taasi ma aayadda oo dhan, laakiin kuwa shan eray ku filan ku odhan fikiraa ee Meyeydaan. Xaqiiqada ah in erayada Kitaabka waa erayadii Ilaah qudhiisu waa weyn. Oo anigu waxaan u malayn kuwa ...
Air Jordans waa halyeey. Anigu ma aan xirtaan iyaga badan oo sii kordhaya in kastoo, sababtoo ah waalidka aan diiday inuu ridiculously ii soo iibsadaan kabo qaali. Anigu ma jeclaan, laakiin waxaan ogaa in aan marnaba heli lahaa gacmahayga on labo ka mid ah. Sidaas waxaa aan ku qasbay si ay ula qabsadaan - by iska iyagu ma jiraan. Waxaa la lamaane dheer oo sannado isku dayaya inaan ka dhaadhiciyo in tababarayaasha cross Reebok ahaayeen horyalka. Laakiin sidii aan helay ka weyn, Waxaan ogaaday Jordans ahaayeen adag tahay in la iska indha. All of saaxiibaday lahaa labo ka mid ah ama labo, iyo mid ka mid ah saaxiibaday ayaa lagu darana Waali iyaga la. Marka style cusub oo soo baxay, ayuu joojin lahaa oo kaliya by labiska Foot maxaliga ah markii uu waqti qaar ka mid lacag la'aan ah; ayuu naftiisa dhisay hareeraha qaadan in labada ciyaaryahan cusub. Oo wuxuu kaloo sameeyey hubaa inuu yiqiin oo dhammu taariikhaha sii daayo Urdun, ayuu iibsan lahayd kabaha isla midabbo kala duwan, oo uu inta badan ku qarash gareen doonto subaxa Sabtida degeen baxay hore ee dukaamada kabaha. Waxaa afuufeen maankayga. Sidaas dambeyntii waxaan lahaa inaan ku weydiin, "Waa maxay sidaa gaar ah oo ku saabsan kabo, kuwaas oo?! Waxaa cad waxaan seegay wax." My saaxiib ayaa jaceeylka la Jordans dhigay war qoraal ah oo. Haddii ay run tahay ama aan, ayuu yidhi ...
Qofna ma jecla droppers magaca. Waad og tahay qofka aan la hadlayo ku saabsan. dadka Kuwa aad rabto in aad ogaato si ay u ogaadaan dadka ay u badan tahay in aad rabto in aad ogaato. Marka aan ka fekero "namedropper,"Waxaa jira hal nin in si deg deg ah ku soo dhaca maskaxdooda. Waxaan kaliya la kulmay sacab muggiis oo jeer, laakiin mar kasta oo aan la hadlay, nus ka mid ah wada hadalka waxa kor loogu qaaday oo leh dhibicyo magaca isdabamarin. Wuxuuna ogyahay tiro wanaagsan dadka "waqti weyn", iyo waxa uu leeyahay awood aan macquul ahayn si dhuumasho ah magacyada kuwa galay wada hadalka kasta. Halkan tusaale. waxaan idinku leeyahay, "Nin Hey, waa meeqa saac?"Isaga oo reply: "Oh, waa duhur. I xasuusinaysaa markii aan ciyaaray putt putt la Michael Jackson duhurkii in Paris. "Word? Daacadii, waxa kaliya oo aan magacaabi droppers na irk in kastoo. Waa dadka faana ee guud. Waxaan ka heli daalay nin maqalka koray faana maalmood kubada cagta ee dugsiga sare ay (waxa la joogaa wakhtigii ay u guuraan on, sayidow). Waxaan u koraan daalay saaxiibadeena mudan in la helo qaar ka mid ah si ay tweet ku saabsan meel kasta oo qalaad ay soo booqdaan. Oo ma waxaan ku caddaynaynaa dulqaadasho badan oo loogu talagalay dadka si faahfaahsan inoo item kasta oo qaali ah oo Gadan (haddii aanay tahay heesaa, Dabcan). Haddii waxa uu si qarsoon ugu faanayay ku saabsan ...
Waxaan u dhaqaaji habboonayd On?
Waxaan kor u xajisay sheekada taxanaha ah Trayvon Martin tan iyo bilowgii. Sida qaar badan oo idinka mid ah waxaan daawaday caymiska wararka, akhriyo articles ah, oo ka hadlay waxa ku saabsan saaxiibada. Waxaa heysatay wada hadalka dadweynaha oo ku caasiyoobeen dood badan loo baahan yahay oo ku saabsan tartanka in America. Xaqiiqda fool xun of cunsuriyada ahaa riixay hore ee wejigayagii, iyo xataa kuwa jecel yihiin in ay iska u kajirin waxaa lagu qasbay in ay ka hadlaan waxa ku saabsan. In ka badan hal sano ka dib, dilaaga Trayvon ayaa isku dayay laakiin kama ay helin eed. Ma taas micnaheedu waa in aynu ka guurto on ka arrimaha? Waxay helay isaga oo aan waxba galabsan, saas oo kalay kuwanuna "arrimaha tartanka" waa in aan sida dhabta ah sida aan u maleeyay in ay ahaayeen, xaq u? Taasi ma noqon karaan kuwo sii runta ka. Waxaan leeyahay qorshaha ugu jirin ka doodaan xaqiiqooyinka, Trayvon qof, ama xukunka in xaaladda this naxdin leh, laakiin waxaan samayn qabaa dood qaar ka mid ah waa in ay sii wadaan. maxkamadda waa in ka badan, laakiin wada hadalka waa in aanay noqon. Maxaad Interest ah? Waxaan ognahay inay jiraan dad badan oo la yaabanahay sababta ay maxkamad this gaar ah ayaa qabsaday dareenka aad u badan. Qaar kale la yaabanahay sababta ay qaar ka mid ah dadka waawayn madow yihiin si deg deg ah ka nixi Trayvon Martin, inkastoo xaqiiqda ah in uu lahaa arrimaha isaga u gaar ah ....
rap & Diinta
Waayo, inta aan xusuusan karo, hip hop uu jaceeylka ah Ilaah iyo Diinta. Waxaan ula jeedaa ha soo jeedinaya in dhammaan heesaa waa Addomahaaga diinta. Laakiin heesaa yar - ama wax fanaaniinta waayo, xaalkan in - gariirin karin rabitaanka inay Ilaah ka mid ah meel ay tahay. Waa dabiiciga ah iyo inoo wanaagsan inaynu hadli ku saabsan Ilaah, laakiin su'aashu waxay tahay, waxa aan ku yidhaahdeen? Qaar ka mid ah odhan doonaa,, "Waxa kaliya music. Ha u qaadan si dhab ah!" Laakiin waxa la sheegay in heesaa on codbaahiyaha waa ka sii daran ka badan aad u malaynayso in. Qaar ka mid ah ayaa loo isticmaalaa hip hop ay u muujiyaan in ay aaminsan yihiin diinta u kali ama ka maqan oo dhanba. Islam, The Five Percenters, Masiixiyada, ee shakiga, mulxidnimo, iyo diimaha kale ayaa lagu dalacsiiyay dhex foomka farshaxanka. Waxaan qabaa hip hop waa gaar ah ku habboon si ay u muujiyaan daacadnimada iyo saa'ixiinta ah wax aynu ku jirno dareen ku saabsan. Qayb ahaan sababtoo ah rawness kalifaya dhaqanka ee qaarkeedna maxaa yeelay, hip hop u oggolaanaysa in erayada dheeraad ah, sidaas aad si dhab ah "baraan karaan." Laakiin inta badan hop waqti misigta badan yahay sida tima jare badan class Sunday School a. Heesaa dayasho ordi off afka, in ay ogaadaan waxa ay ka hadlayaan ama ma. daacadda vs. Xowli ...
Horaantii sanadkan ayaan u tegey on safar la aan kitaabkayga ka cusub, Life The Good. habeen walba, Waxaan siiyey hadalka ah in ay isku dayeen in ay ka jawaabaan su'aasha ah, "Maxay ka dhigan tahay in ay ku noolaadaan nolol wanaagsan?" In Chattanooga, TN, waxaan diiwaan fariin, waxaana ka sarreeya ayaan u posted. Buuga sii daayay October 1, 2012 oo halkan aad ka iibsan kartaa. Si aad wax badan oo ku saabsan buugga idinka barto halkan riix karaa. Waxaad ka iibsan kartaa The album Life Good halkan. Ma ku nooshahay nolol wanaagsan?
Inta badan ayaa i garan sida heesaa iyo jilaa, laakiin runta waa, wadnaha Waxaan had iyo jeer ahaa wax wacdiya. Waayo, inta aan la samaynta music, waxaan jeclahay qotada dheer ayaa ah inay u naadiso Injiil Oo waxaan sheegi doonaa wanaag iyo ammaan Ciise Masiix. By nimcada Ilaah ee aan fursad u helay in ay isticmaalaan music inay sameeyaan in masraxa dadweynaha. Waxaan jeclaaday labaad kasta waxaa ka mid ah oo aan isku dayay in uu u qaban la heer sare ah. Muddo sanado ah, Waxaan dareensanaa, Ilaah ma ii soo wacaya iyo qalabaynta i kaliya in ay sameeyaan music, laakiin sidoo kale inuu wax ku wacdiyo iyo in uu qoro. Taasi waa sababta sanadkii la soo dhaafay aan ku qoray Life The Good, buug in beryahan qoto dheer galay fariin ka dambeeya aan record ee horyaalka isla. Waxaa sidoo kale sababta aan ku dhawaaqay dayrta la soo dhaafay in aan doonaynin in la safraya arrin sida ugu badan ee aan ku jirey. Waxaan doonayaa in ay bartaan sida loo noqon wadaad aamin ah, iyo in kaliya ee si dhab ah u dhici karaa in macnaha guud ee kaniisadda maxalliga ah. Sidaas daraaddeed markii aan qaato in ay maal-waxbarasho ka wadaadada cibaado leh ee aan kaniisadda ee Washington, DC. Rabbi raalli, sida aan weliba u adeego on shaqaalaha ee aan kaniisadda, Waxaan sidoo kale u yeelan doontaa in ...
All Waxaan u Baahan yahay In Ilaah
Halkan audio ka khudbad dhawaan aan idinku wacdiyey on Sabuurradii 142. All oo naga mid ah soo maraan waqtiyo adag, laakiin Sabuurka noo muujinaysaa in xitaa jeer ugu xumaa ee aan ka heli kartaa wax walba oo aan u baahanahay in Ilaah. The afar dhibcood ka jira: waxaan. Ilaah waa Friend in Times of Dhibaato II. Ilaah waa Protection in Times of Dhibaato III. Ilaah waa Treasure in Times of Dhibaato IV. Ilaah waa Our Bixiyaha in Times of Dhibaato
Ahmiyadda of Words
Halkan khudbad aan idinku wacdiyey bilood laba ka hor on Matthew 12:36. Waan ku baryayaaye, waa dhiirigelin ah in aad.
In dabaal of sii daayo aan kitaabkayga ka, Life The Good, halkan video rasmiga ah ee "Mid ka mid ah lix iyo toban," ka album cusub, sidoo kale loo yaqaan Life The Good.
Eeg ee TT la Trip Lee sida ayuu ka hadlaysaa highs iyo hooseyso ee geedi socodka uu album ugu dambeeyey "The Life Good."
Halkan khudbad dhawaan aan idinku wacdiyey on Jeremiah 31:33. dhibcood My ugu waaweyni waxay ahaayeen: waxaan. Ilaah Ma Caalami shaqeynta II. Ilaah ma Working Gudaha III. Ilaah ma Working Interpersonally IV. Ilaah waa soo Work
Waa maxay My Book About?
Buuga soo baxa October 1, laakiin waxa aad kala soo bixi kartaa cutubka muunad at TheGoodLifeTheBook.com, oo waxaad ka hor-si kara buugga halkan.
Milicsi on Cahdiga ah
Waxaan daawaday inta badan heshiisyada siyaasadeed, kuwaas oo labadii toddobaad ee la soo dhaafay. Afhayeenka guud igu taal oo aan kaa gargaari kara laakiin tiro ka badan-falanqeeyaan Fariimaha iyo xirfadaha codkarnimada ka mid ah musharraxiinta iyo taageerayaashooda. Qof kasta on stage in isku dayeen in ay idiin sasabin la sheekooyinka gaarka ah iyo / ama ballamo weyn. Waxaan qiran doonaa, qaar ka mid ah ay doonayaan, waxay ahaayeen sharaf leh, laakiin inta badan khudbado ka dareemay xisaabiyaa, madhan, iyo Gaarna siyaasadeed- ii ugu yaraan. Qaar ka mid ah dhibcood hadlaya ahaayeen toos ah khalad aad u. Laakiin doodaya dhufto ee ma aha barta of this post. Mid ka mid ah waxyaalaha aan ogaaday in uu ahaa halka labada dhinac ay isku dayayeen in ay aad iibiso musharaxiintooda, waxay sidoo kale isku dayaya in aad iibiso aragtiyaha ay. Sida laga soo xigtay iyaga, propserity wax waa dal la ballan qaaday, oo xisbiga uu doonayo in uu ahaado Muuse. In ay view, Nolosha wanaagsan dhalin waa la qaadan qani ah marka aad shaqo adag, iyo musharax oo badbaadiye kale oo halkaas waxaad qaadan kartaa. Hadda waxaa jira waxba dembi miidhan ah oo ku saabsan Xoolo. Oo lagu Abaal marin shaqo adag waa wax fiican,, laakiin taasi ma noqon kartaa meesha rajadeenna been. Wealth waa in aanay noqon goolka dhamaadka our, waa inay noqdaan hab ah in dhamaadka weyn. Waxaan sidoo kale ma awoodaan in ay ...
Cadho The Perfect Ilaah
Halkan khudbad Waxaan dhawaan wacdiyey on Sabuurradii 95:10-11. My 3 dhibcood way fudud yihiin: waxaan. Dembigu dhirfinaya Cadho Ilaah II. Dembigu waa Jidka Alernate ah III. Dembigu nagu haysa inta kale Ilaah ka waan ku baryayaaye, tani waa dhiirigelin ah in aad
Waa maxay sababta aan qoray buug
sii daayo The buug on October 1, laakiin waxaad hore si karo hadda halkan.
Safarka Lee on "Life Beautiful" Ilaah ka yimid waxay doonayaan on vimeo. song ugu horeeyay ee aan qoray aan album ugu dambeeyey, "Life The Good" ahaa song ah oo lagu magacaabo "Beautiful Life." Waxay doonayaan Ilaah i weydiiyay oo ku saabsan song iyo qalbigayga waxaa ka dambeeya. Halkan ay dhan post blog. Oo halkan waa lyrics in ay gabaygii, kaas oo kasoo muuqday V. Rose: Hook: Beautiful Life Inside Living Neefsashada guurista Sidaas daraaddeed ha Hope Kac Ilaah waa ogaa wuxuu ahaa qabanayaan markii uu siiyey Beautiful Verse Life Beautiful 1: walaashay Gacaliye, Waxaan maqli meesha aad at waan ogahay ma aha waxba xumad fudud iyada oo socday in jira ilmo ee uurkaaga, laakiin ma aha in aad isku dayay samayn inaad ku wada qaadan lahaa dib haddii aad ogaa in, laakiin aad aan la qabto wax fikrad ah in waqti Si aad saaxiib, habeenkaas dabayaaqadii Marka aad moodayay in aad adigu ahaa jacayl samaynta, in aad nolosha ka dhigi lahaa Oo haatan waxa uu dareensan caddaalad darro, Nin aan la jeclaan Waxaad aan la heystaa nolol, toogan, waqtiga run ahaantii ma aha xaq ma arrin kuu sheegi karaa in aan fahmo xanuun Laakiinse waan aqaan ma aha in aad dareento niyad iyo xishoon Oo waan ogahay in ilmaha caloosha ma aha ciyaar uu helay ...
Ninka Ilaah wuxuu leeyahay, waayo, wuxuu maalka wax walba ee ka mid ah uu leeyahay. oo khasnadahayga caadiga ah Dad badan oo la diidi karaa isaga, ama haddii uu ogol yahay in ay iyaga leeyihiin, Raaxada iyaga la si cadho doonaa in ay marna lagama maarmaan noqon doona in uu farxad. Ama hadduu waa in uu arko inuu iyaga sii daayo, mid ka mid ah ka dib markii mid ka mid ah, ayuu dhib dareemi doontaa dareen inay kaa luntay, isagoo Source wax kasta waxa uu leeyahay in ka mid ah qanacsanaanta oo dhan, waxaan jeclahay oo dhan, dhan ku farxaan. Wax kasta oo dhici karta in uu waayi uu dhab ahaantii waxba laga badiyay, waayo, haatan waxaa oo dhan ayaa ka mid ah, oo isna wuu Gaarna leeyahay, sharci iyo weligeedba. A.W. Tozer, The wadida Ilaah
Xaga raga kitaabiga ah iyo muhiimadda ay leedahay in lagu daydo oo xagga Ilaah ka doonayaan on vimeo. Saaxiibbaday way at doonayaan Ilaah i weydiiyay su'aalo ku saabsan caqabadaha in bilowgii xooggooda iyo sida loo xaliyo dhibaatada. Halkan waxa aan u sheegay oo
Sidee Romans 8 Wuxuu ka caawiyaa Trip Lee Ilaah ka yimid waxay doonayaan on vimeo. Saaxiibbaday way at doonayaan Ilaah iga codsaday in ay la wadaagaan saabsan meeshuu Qorniinka in igu caawisaa ugu. In clip this waxaan milicsato Romans cutubka 8
Trip Lee ma aha Robot ka doonayaan Ilaah on vimeo. Intii lagu guda jiray waraysi uu dhawaan, Waxay doonayaan Ilaah i weydiiyay in ay ka hadlaan wax yar oo ku saabsan song, Robot ka Life The Good
Waa Maxay Injiil? Ilaah ka yimid waxay doonayaan on vimeo. clip kale oo aan ka wareysi la doonayaan Ilaah. Waxay i weydiiyay haddii aan raab yaabaa Injiil ee 2 daqiiqo. Tani waxay ii ahayd isku day
Tani waa qayb ka mid ah wareysi aan la doonayaan Ilaah sameeyey. Waxaan boostada doonaa qaybaha kale ee Wasarada ka dhigeysa ilaa hip hop iyo dagaalka ka dhanka ah Sin ka doonayaan Ilaah on vimeo.
Life Good The Kitaabka
Sida badan ee aad ogtahay, Waxaan ka shaqeeya kitaab si ay u tagaan oo ay la socdaan aan album cusub, Life The Good. Well kitaabkan la sii daayo doonaa Moody daabacday on October 1, 2012. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan war-saxaafadeed hoos ku. Oo waxaad u tagtaan TheGoodLifeTheBook.com in lala socodsiiyo marka ay soo bandhigtay. Sinta SOCDAAL ARTIST HOP LEE sii daayo BOOK ugu horeeyay ee nolosha wanaagsan ON OCTOBER 1, 2012 ILAA mashruuca Upcoming Moody daabacday ku dhisan in la sii daayo album hadda iyo qeexaa "The Life Good" by babac dhigaya dadka in aan ku sii noolaan iftiinka been laakiin koraan on safar cusub oo ka ammaan. Los Angeles, Message. (Laga yaabaa 17, 2012) -Billboard Hip hop Trip artist chart-sareesa Lee ayaa isu diyaarinaya in uu buugga ugu horeysay ee loo sii daayo, Life The Good (Moody Publishers). sii A uu album ugu dambeeyay taas oo sii daayay April 10, 2012 iyada oo Records Reach, Life Good The dhufan doono dukaamada dalka oo on October 1, 2012. "Sanado, Waxaan samaynaya music adag views our dunida oo dhibcood si ay Masiixa - laakiin waxaa mar walba waa ay ka liidato si music, maxaa yeelay, waxaa jira oo kaliya si aad aad ula xiriiri karaa song a,"Ayaa sheegay in Trip. "Album The siiyey dhagaystayaasha snapshots nolosha wanaagsan, iyo buugga doono ...
Khibrad Life wanaagsan Live
The safar Life Good furmay Isbuucaan! Ogow oo taariikhda noqon doonaa kuugu dhow. Waxaan noqon doonaa ee Minneapolis, Michigan, Virginia Beach, Nashville, Orlando, iyo Dallas. Taariikhaha More waxaa lagu dari doonaa dhakhsaha badan si fiican u! Riix links ee tigidhada ama tag ReachRecords.com/events.
Kuwani waa lyrics ka gabaygayga iLove on my album cusub "Life Good The." Qof kale dhibaato ay ka soo iLove? Verse 1: Magaca My saaxiibtiis ayaa ku bilaabmayaa I ah iftiimay dhalaalaya sida xiddigaha in meelaha xusullada la Samada by dhinacayga, marka ay mugdi ayay nuurka Waxay befriends badan, oo aan lumaan indhaheedii bay ku taag at iyada halkii aad ka daawan na Orod iyadii marka aan tooso aan ku dhacdo our neefta Waxay addicting, Runta: nahay fiends Laakiin waxaan aan dhuuqay xabagta, waxaan kaliya negaanaya shaashadaha Waxay noo taliyaa, arki caddayn marka ay siddo Waxaan u badan tahay in ay qaataan lahaa laba iyada ka badan laba aadanaha walaalahaa, Her? Qaar ka mid ah qaar ka mid weyn oo yar yar waxaan uga dhigto em leh maalin kasta in ay iyada sii, si waxaan heli markay dhibciyo xitaa haddii aan ma awoodi karo iyada ii weydii haddii aan runtii iyada u baahan tahay? Waxaan noqon sida, "Sort of" Laakiin markii aan arkay suuqa Waxaan u lahaa in iyada maxkamad aan iyada ku hayso accessories, ya wiil ha iyada kharribaad, waxaan iyada doonayaa in aan nolosha, Waxaan samayn lahaa wax kasta oo iyada u illoobin oo ku saabsan wiil dime a, iyada oo dheeraad ah sida quarter ayaan la ahay waqtiga oo dhan,...
Life The Good halkan waa!
My album Solo afaraad, "The Life Good" ayaa si rasmi ah la sii daayay! Iibso album ka iTunes halkan. Waxa kale oo aad ka qaadan kartaa album ee dukaamada ugu Lifeway, Family Christian, Mardel, iyo Target & Wal-Mart (dukaamada xulo). Sidoo kale, waxaad daawan kartaa video cusub ee "Waxaan ahay Good" soo bandhigtay Lecrae halkan. Waxaan iskaashi la Voice of shahiid ah on this mid si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan cadaadis iyo ku dhiirri geliyo rumaystayaasha si adag taagan. ii soo biir ku tukanayay in Rabbigu isticmaali lahaa mashruucan si ay uga hortagaan iyo dhiiri badan!
Waa maxay Sidaas Good Friday About Good?
Waa wax iska caadi ah in la xusuusto maalinta dhimashaduna qof ee. Qof kasta oo ka badiyay qof aad jeceshahay waa og yahay inaad waligey illoobi doonaa maalinta ay maray. Waa dhamaadka nolosha a, waana qaracan. Dabcan, sida tartan aadanaha, waxaan aadan xusuusan ma aha oo kaliya kuwa la jecel yahay. Marka tirooyinka dadweynaha muhiim xilli hore dhintaan, waxaannu xusuusan nahay oo ay barooran doonaan maalinta ay qaaday naga iyo sidoo. Our quruun xusuustaa maalintii Martin Luther King Jr ah. ayaa la toogtay, iyo maalin John F Kennedy ee la dilay. Laakiin wakhtigaas gaar ah waxaa marnaba gudbiyo sida wanaagsan. Kuwa ahaayeen maalmood bahalnimada, halkaas oo nin oo la jecel yahay la dilay by dilay xaasidnimo. Weli, laba kun oo sano ka hor Ciisihii reer Naasared la dilay by dilay xaasidnimo ah isaga u gaar ah, oo maalintaas sida "Good waxaannu xusuusan nahay" Friday. Waa maxay sidaa wanaagsan oo ku saabsan maalinta ugu hadlay oo ku saabsan nin ee taariikhda aadanaha waxaa xoog ku garaacay iyo dilay by cadaawayaashiisa? Xaqiiqada ah in dadka sharka ku fikira lahaa in dilka Wiilka Ilaah waa naxdin leh, waana wax shaki dembi ugu weynaa abid ka go'an. Laakiin dhimashadiisa waa ka duwan dhimasho kale oo kasta waxaa ka hor ama ka dib waxa . Waxaan wici kartaa maalintaas "Good" Friday sababo badan. Waxa uu ...
"Waan fiicanahay" waxaa ka mid ah heesaha ugu dambeeya in la diiwaan geliyo, waayo, album cusub, Life The Good. Lecrae iyo waxaan dhab qoray iyo diiwaan song ah oo gebi ahaanba kala duwan, oo aan u jeclaa markii ugu horraysay. Laakiin ugu danbeyn waxaan go'aansaday in ay ahayd oo kaliya fiican; oo waxaan doonayay inaan wax weyn u saaray. Sidaas daraaddeed waxaan u soo ciyaaray dhowr garaac isaga u sheegay inaan lyrics sow kuma qorna waayo, weli, oo annana waxaannu eryannay labada jacayl la this ka mid ah. Waxay ahayd Tacaddi, dagaal, iyo eegayey. Waxaan u sheegay Waxaan doonayay inaan qoro heesta ah in lagu gaadhsiiyo ammaanka ee Masiixa. Waxaan doonayay inaan ku dhiiri dadka Masiixiyiinta ah si ay u joojiyaan nool cabsi iyo bilaabaan ku nool Romans 8. Waxaan go'aansaday on the "Waxaan ahay Good" theme, waxaan Rabbiga ka codsaday gargaar, oo waxaan bilaabay in qoraal geesood soo horjeeda ee Reach ee studio Atlanta. Waxaan habeenkaas diiwaan ugu of our vocals, iyo markii la sameeyey oo dhan waxaan u jeclaaday. Waxaan rajeynayaa in sharaxaad this of lyrics ee naga caawin doontaa in la dheefshiido content ... Verse 1: Waxaan maqli dhib ee soo socda ii, dhimashadu waa at habka albaabka / cabsan ayaa sheegay ahay Bro halligmi, laakiin aan ahayn wixii Eebe ii dhihi / Waxa uu sheegay in aan eed ma aha in kastoo ...
Good Life Album Release Xisbiga
Diiwaan Shirka Up Man halkan iyo in ka badan oo ku saabsan my album bartaan “Life The Good" halkan
Love ugu weyn ee dhan
Qof waliba waxa uu la jecel yahay. Haddii aan qiran ama ma, oo dhan oo naga mid ah aad u jecel yihiin this dabiiciga ah si ay u dareemaan jeclaa iyo mahadnaqayo by dadka kale. Qaar badan oo naga mid ah ku qaataan nolosheena oo dhan raadinayay qof inuu nagu jecel, oo rajaynaya in qof- qof- dhergin doonaa xiisootay this gudaha. Waa hagaag, haddii aad qorsheyneysa inay naftaada waayi in hindiga maanta iyo aad rajeynaya in aad ugu dambeyntii ka dhergin doonaa u doonaysa in, Waxaan rabnaa in aad ogaato in aad Ujeedada waa mid aad u hooseeya. Ma aad heli doontaa jacaylka weyn ee dhan at casho iftiin shumac caawa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira ah oo dhan awood, oo dhan dheregto, jacaylka kaamilka aad heli karto. Waxaa jira Ilaah wuu idin jecel yahay in ka badan aad abid ka fekeri karaa. Jacaylkiisa ma aha yeelsiiyeen oo uma baahnid in aad aad isaga u soo jiito ama ka shaqeeyaan, waxaa ka. Ma Ilaah Love Us? Waan ogahay mararka qaar badan oo naga mid ah la yaabanahay in Ilaah run ahaantii noo jecel yahay. Waxa uu u muuqdaa si fog. Oo waxaa laga yaabaa in aan joojin lahaa shaki lahayn haddii isna wuxuu sameeyey wax si ay u cad noo. Runta waxa ay na, Waxa uu hore u leedahay. Kitaabku waxa uu leeyahay, "Ilaah jacaylkiisii ​​inoogu muujiyey waayo, in intii aannu weli dembilayaal, Masiixu waa inoo dhintay." Oo haddana wuxuu leeyahay,...
"robot" waa song koowaad ee aan album socda "The Life Good" sii daayo April 10. Lyrics u song iyo a free download ka hooseeyaan waxaan robot ma ihi, Anigu ma ihi Gadzhiyev oo ah in aadan tahay puppeteer iyo anigu ma drone ah ku haysataa Master cusub oo waxaan isaga raacaan oo keliya Waxaan doonayaa nolol wanaagsan tan iyo waxaan tegey Verse 1: Hey Waxaan ku dhashay ka yar aadanaha waan ogahay waxaa codadka waalan Laakiin waxaan si dhab ah u dhashay robot ah sida ilmo No nolosha dhabta ah oo igu taal, Kaliya waxaan ciyaaray aan door No gacanta is, Kaliya waxaan sameeyey wixii la ii sheegay in aan helay amarkayga ugu horeysay, Waxaan ahaa maalin kaliya jir Laakiin ma aanan haysan fursad, keeni qalbigaygu hab qabow Qalbigaygu amarka qaaday, Ma jebin yaabaa caaryada iibsadaa addoonsan oo anna ma aan qaadan karto gacanta Sidaas waxaa I horjoogsado kaliya dhar robot aan Iyadoo saaxiibo robot aan, iyo robot socodka Nolosha siyaabo robot, waxay keeni in waan ogahay Ilaa aan maqlay oo dhan ayaan la sii daayay ayaa laga yaabaa naftayda robot, Waxaan sida ... Hook maxay sababta aad mar walba isku dayayaan in ay ii xakameeyo? Adiguna ma waxaad tahay aan Tababaraha in ...
Anigu ma ihi Robot a
"Life The Good" dhibciyo April 10. Hel “robot" free halkan
Waayo, qeybtii hore ee 2011, songs ma aan sameeyey, Tilmaamo lahayn, shows lahayn, waxba ma. Waxaan u dhaqaaqay Washington DC oo qaaday ku saabsan 5 bilood off for internship a-dhaqatada. Inkasta oo la ii ma safraya dunida oo hor taagan badda ka mid ah dadka habeen kasta, waxa uu ahaa mid ka mid ah xilli ciyaareedyadii ugu badan dhala oo noloshayda. Marka internship ku dhamaatay Waxaan bilaabay mar kale u safraya oo si tartiib ah u shaqeeyo on music cusub bilaabay. Qiyaastii dhici waxaan bilowday inay jaanta buuxa shaqeeya on my album Solo afaraad. Oo markii bilood oo howl adag, album la badan sameeyey. Waxaan xitaa ma muujin karaan sida ugu faraxsanahay inaan u sii daayo. Waxaan mar walba u eegay dadka siin wax ma waxaan iyaga u siiyey ka hor. Ma doonayo inaan in remake album ah waxaan hore u sameeyey. Waxaan doonayaa in aan idin siiyo album cusub, iyadoo music cusub, iyo siyaabo cusub oo u dabaal runta isku jir ah. In 2006 on my album ugu horeeyay, Hadday ogyihiin, Waxaan doonayay inaan dadka ku saabsan Ilaah ammaan badan oo aan rabay inay ogaadaan sheeg. In 2008, "20/20" ka soo baxay oo waxaan doonayay inaan ku dhiiri dadka waawayn si ay u arkaan Rabbiga la aragtida dhabta ah. 2 sano ka dib, "Intii u dhaxaysay ...
Halkan hoggaanka u dhiirranaada MLK ayaa soo bandhigay (in aan ku xuso qaar ka mid ah qoraal ugu fiican ee aan abid akhriyo). Waxa uu diiday in ay qaataan sharciyo dulmi iyo diido inuu samir ku sug. Wuxuu bilaaba ka wakiil ah tartanka oo dhan dadka. Sida nin madow, Waxaan si qoto dheer ugu mahadcelinayaa Ilaah ahay, shuqulka dhammaado xaggiisa. Oo sida isagoo Masiixi ah, Waxaan doonayaa inaan si ay ula dagaalamaan caddaalad kaliya u adag yahay sida uu sameeyey, haynta ku hay in Ciise keliya keeni karaan caddaaladda kaamil ah. Oo wuxuu Doono. Tani waa hoostana aad ka warqad caan MLK ee. Waa in aad ka akhrisan wax oo dhan marka aad fursad u hesho. "Waxaan sugayay muddo ka badan 340 sano xuquuqda our dastuurka oo Ilaah siiyey. The quruumaha Asia iyo Africa waxaa la xawaaraha jetlike hulaaqaya helo madaxbannaanida siyaasadeed, laakiin waxaan weli Socda faraska iyo buggy xawaaraha xagga helo koob bun ah ee counter qado. Waxaa laga yaabaa in ay tahay u fududahay kuwa aan waligood dareemay demisaan beegan kalasaar in la yidhaahdo, "Sug." Laakiin markii aad aragteen Lynch mobs sharta hooyooyinka iyo awowayaashiin ugu doonista iyo Maansheeyo Walaalo ah oo walaalahaa at lo'dii; markii aad aragteen Booliska nacaybka buuxsantay habaaraa,...
Waa fikrad By King Teebhoose ah
Maanta waxaan u dabaal tagay hoggaamiyihii ugu horreeyey ee dhaq-dhaqaaqa Xuquuqda Madaniga ah, Dr. Martin Luther King Jr. Rabbigu wuxuu ninkan loo isticmaalaa in lagu dhiirrigeliyo quruun, iyo guuraan dadka dhinaca sinaanta. Waxaa weli ka shaqeeyo in la sameeyo, laakiin uu ahaa mid qiimo leh. geesiga No waa qumman yahay, iyo Dr. King ahaa marka laga reebo lahayn, laakiin waxaan jeclahay isaga siyaabo badan oo aan u waxyoonay by uu dhaxalka. Halkan jira saddex waxyaalood oo ku saabsan naftiisa in loo Waxyoodo ahayn ii. 1. Xaraaradda for Justice Dr. King ayaa la nalaayee by cadaalad ah in uu ahaa baahsan ee dunida, Oo noloshiisuna waxay dagaal ku qaadeen ka go'an. In Kitaabka Quduuska ah, uu ku arkay riyo Ilaah ee dunida, Oo wuxuu arkay nebiyadii oo ahaa in ku baaqaynaa in dhamaadka dulmi, oo wuxuu ahaa dareen si ay u arkaan cadaaladda in inay dhacaan. Waxaan jecel hamiday this caddaalad, oo Ilaah u barya Ilaah ay sii wadi doonto in looga shaqeeyo qalbigayga u gaar ah. Waxaan doonayaa in aan dagaalamo la dulmay iyo injiilka ku wacdiyo, rajo la'aan ah. 2. Hoggaanka Inkastoo uu youthfulness, Dr. khudbado sheegid King iyo madarad aragti cad u geeyeen ah sida hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa. ugama uu dib u fadhiiso oo ka caban, Kor buu u degay oo ...
Xataa marka farxad iyo raaxo naga tegin, waxaan hubaa in uu noqon karaa mid gabi ahaanba Ilaaheenna aan Doono. Cesraa 9:9
Mid ka mid ah Life: Waxaa La wadaag
laba ka mid ah todobaad ka hor, Waxaan ka hadlay Shirka Qaranka Campus Outreach ku saabsan rumayste kasta ee masuuliyadaada inaad aaso. My text ahaa 2 Corinthians 5:18-21. Halkan video ka fadhiga in. Mid ka mid ah Life | Waxaa La wadaag - ka Outreach Campus on vimeo turaanturoon Lee. Haddii aad xiisaynayso, halkan video ka munaaqashooyinka khubarrada waxaan qayb ka mid ah uu ahaa sidoo kale a. dood waxa uu ahaa oo ku saabsan wasaaradda campus, kaniisadda maxalliga ah, Adeegga Wayn, iwm: Wadaadada Panel ka Outreach Campus on vimeo. Plus, Waxaan ku talinaynaa in aad ka shirka hubi dhammaan warbaahinta kale. Waxaa jiray tan oo waxbaridda weyn waxaan u maleynayaa waxaad ka heli doontaa in ay ku dhisanto.
Waxaan la dagaallama
Waxaan u dagaalami si ay u caddeeyaan sida kuwa xaqa ahu waxaan nahay, halmaamay in kan xaqa ah ma kuwaas oo Ciise u yimid. Matt 9:13
3 Siyaabaha Ilaah gaalow
Ma waxaad beeniyay Ilaaha Caalamka? Rumayso ama ha rumaysan, tani waa su'aal muhiim ah oo dhan oo naga mid ah in aad ka fikirto. Waa ay iska cadahay in Kitaabka in nolosha weligeed ah waxaa si xor ah siiyey kuwa isku halleeya Eebe iyo injiilka rumaysan, iyo xukun kaliya waxaa lagu fuliyaa kuwa ka gaaloowday. Laakiin waxaa jira in ka badan hal hab oo ay Ilaah u diidi. Halkan waxaa ku qoran saddex inaan helay Axdiga Cusub. 1. Ismoogaysiinta in Ciise waa kan Waxa uu sheegay in uu ahaa "Yaa waa beenaaleh, laakiin kii beenisay in Ciise yahay Masiixa,? Taasi waa ka geesta ah, kii oo beenisay Aabbaha iyo Wiilka. mid ka mid No kii Wiilka beenisay leeyahay Aabbaha. Ku alla kii qirta Wiilka Aabbaha ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay." 1 John 2:22-23 Waxaa jira dad badan oo dunida maanta ka fikiraan naftooda sida dadka ruuxi ah ama xitaa diinta. Waxay aaminsan yihiin in Ilaah jirta, oo ay isku dayaan in ay isaga caabudaan hab iyaga u gaar ah. Waxaa laga yaabaa in ay xitaa Ciise arko sida macallin weyn ama nebi ka yimid Ilaah. Laakiin haddii aanay rumaysanahay in Ciise yahay kan uu sheegay in uu yahay, waxay yihiin diido. Ciise arkay oo keliya sida weyn a ...
Waayo, dadka Masiixiyiinta ah, su'aashu waxay tahay ma in aan jirrabaadda wajihi doonaan, laakiin sida aan u jawaabi doonaa marka aan samayn. In Luke 4:1-2, waxaan ka akhrisan ku saabsan jirrabaadda Ciise iyo sida uu ku jawaabay. Halkan audio ka khudbad kooban oo aan idinku wacdiyey on marinka in aan kaniisadda dhowr bilood ka dib. Waxaan doonayay in ay eegaan jirrabaadda Ciise ', milicsato adeecaan, oo ka feker waxa aan ka baran karno goobta this. Maxay yihiin waxyaalaha waa Annagu waxaannu xusuusan nahay in times of jirrabaadda? Halkan waxaa ku qoran qodobada muhiimka ah: waxaan. Ilaah Kuu ogolaanayaa iyo Isticmaalo Duufsado sida Qayb ka mid ah uu Plan II. Tabar ma aha waa marmarsiinyo ay uga sii In si Duufsado III. Jirrabi horay loo Adkaaday Ciise Duufsado by BragOnMyLord waan ku baryayaaye, waa dhiirigelin ah in aad
Sidee tahay waxaan kuwa dhawrsada In Ilaah hortiisa?
Sida aynu xaqa ah ee Ilaah hortiisa waa? Waxaa runtii waa in ixtiraam la mid ah taas oo Masiix dembi. Waayo, isagu wuxuu qiyaasayey in hab meesheenna, inuu noqdo dembiyada ku jira qolka, oo laga qaban laga yaabaa in la sida mid dembi leh, ma dembiyo isaga u gaar ah, waayo,, laakiin kuwa dadka kale, maxaa yeelay, wuxuu ahaa saafi ah oo ka reeban qalad kasta, oo laga yaabo adkaysan cadaabka in uu ahaa sababo la noo- ma naftiisa u. Waa in si la mid ah, xaqiiqa, in aynu nahay hadda xaqa ah isaga in- ma in la ixtiraamo of our qanacsanaanta haya'ad caddaaladda Ilaah shuqullo noo gaar ah, laakiin sababta oo ah oo xidhiidh la leh xaqnimada Masiixa la inagu xukumay, taas oo aan ku riday on by iimaanka, in kuweenna noqdo. John Calvin this si tartiib ah oo ha dego in Read! Waxaan soo quote this halka diyaarinaya aan fariin ku saabsan 2 Corinthians 5:18-21 Shirka Campus Qaranka Outreach. walax Good
Oo uun aan la hortiisa ka muuqani, laakiin waliba way qaawan yihiin oo bayaan u indhaha u ah kan waa in aan sii xisaabtii. Cibraaniyada 4:13
Baan ku qaadan, ka dibna, rumaysadla'aantooda in Ciise (MA Ciise rumaysatay) waxaa ka jeedsan Ciise si uu u doondoono qanacsan in waxyaabo kale. Iyo rumaysadka xagga Ciise baa imanaysa in Ciise ku qanacsan baahida guriga iyo waxay ku. CAQIIDADA ma aha inta heshiis la xaqiiqooyinka in madaxa; waxaa inta badan waa rabitaanka cuntada ah ee wadnaha oo masaamiir ku saabsan Ciise qanacsanaanta. [Ciise wuxuu ku yidhi,] 'Kii ii yimaadaa ma gaajoon doonaan, oo kii i rumaystaa weligii ma harraadi doono!'John Piper
Waa maxay sababta aan guursaday Sidaas Young: From Aragtidooda naagtayda
About bil ka hor ayaan qoray blog a sheegaya waawayn sababta aan u guursaday si dhallinyarada ah. Waxaan si qoto dheer lagu dhiiri by jawaabaha ka yaa akhriyey oo dhan oo baryadayda ayaa in Rabbigu ku caawin lahaa na in ay ka fekeraan in ka badan kitaabku ku saabsan guurka. Haddii aad aan helin in uu akhriyo in post asalka aad iska baarto halkan: Waa maxay sababta aan ma Hel Xaas Sidaas Young? Well ka dib folks badan oo soo taagay aniga iyo ii sheegay sida waxtar leh waxa ay ahayd iyaga, waayo,, Waxaan u maleeyay in waxa uu noqon lahaa sidii waxtar leh inay naagtaydii ha, Jessica, su'aasha uga jawaabo isku mid ah ka eego. Sidaas halkan waa. Maxaa ka dhigay xaaskeyga go'aansato in aad is guursaday si dhallinyarada ah? Waxay sheegtay ... 1. Waxaan ka helay nin la cibaado Markii ugu horeysay ee aan la kulmay Trip, Waxaan ahaa ma qorsheynayo on guursado waqti dhow. Laakiin ka markii ugu horeysay aan u soo baxay, Waan ogaa waxaa jiray wax ka duwan isaga ku saabsan. Waxa uu ahaa dareen ku saabsan Injiil hab aan marnaba arkin tan ka hor nin aan da '. Waxa kale oo aan la kulmay marna qof oo kale aragti caqli on shukaansi. Thanks to inuu xer ka hor kulliyad uu ku ogaa dhab ahaan waxa uu u maleeyay ...
Halkan qaar video ka khudbad aan idinku wacdiyey horaantii sanadkan ee San Diego. Mawduucan ah shir la "degani", sidaas darteed waxaan doortay inuu wax ku wacdiyo on Romans 12:1-2. Maxay u eg qofka Muslinka ah in uu noqdo "kexeeyey?" dhibcood My ugu waaweyni waxay ahaayeen in ay Muuminiintu ku waa ... 1. Waa lagu sii kaxayn By ​​Mercy 2. Waa lagu sii kaxayn si Caabuda 3. Waxa loo badali Rajaynaynaa in ay waxtar leh!
Waxaan kaliya doonayaa inaan u mahadceliyo qof walba oo tukaday noo intii aannu on safar ee qaarada weyn ee Afrika. Sayidku wuxuu si raxmad leh ugu jawaabay badan oo salaadda kuwa, oo aad isticmaali dhahnay anaga ha inoo inuu saameyn ku yeesho in lix dal oo kala duwan. Safarkaasi waxa uu haatan soo dhamaaday, waxaana uu gool madax caawa. Waxaan u mahad celineynaa lahaa aad salaadda sii safarka ammaan iyo caafimaad. dhowr A oo naga mid ah ma ay aad u fiican tahay iyo waxaan rabnaa in aan u sameeyo guriga caafimaad. Waxaan ku hanweynahay inaan dhajinta blog ah si aad dhan u sheegi ku saabsan safarka. Ilaa markaas waxaan mahad baryadiinna
Us caawi Out la Unashamed Africa
Hadda waa 12:34 ahay in Botswana. Waa maalintii koowaad buuxa ee Africa oo Rabbiga haatan waa shaqaynayaa. The markabka Reach dhan ka degay Johannesburg xalay oo u duulay Botswana saaka. Waxaan helay in ay la kulmaan tan oo taageerayaasha galabta at saxiix aynu ku samaynay at a dukaanka Christian hoose iyo waxaan lahaa qaar ka mid ah waraysiyada weyn. fiidkii Berri waa riwaayad hore ee safar ah oo aan la amped. Waxaan dhab ahaan doonayaan safar this badiyey, waxaana jeclaan lahaa in aad caawinaad. Sidaad u caawin karto? Sidoo kale waa inaad noo caawin tukasho, sidaa darteed in badan oo mahad naqi doonaa, waayo, anigoo ku hadlaya magaca barakada naga siiyo iyada oo ay baryadii badan. 2 Corinthians 1:11 Waxaan si adag u aaminsan yihiin in Rabbigu wuxuu isticmaalaa baryadii dadkiisa si ay u fuliyaan qorshayaal uu. Sidaas aad inoo caawin karto by tukanayay. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah siyaabaha aasaasiga ah ee aad ku tukatid noo oo nala: 1. Taas Rabbigu nagu sii lahaa caafimaad oo xoog leh 2. Taasi innaga qudheennu dhexdeenna ayaynu qaab lahaa sida addoommo 3. Taasi riwaayada si fiican u tegi lahaa 4. Taasi Rabbiga ilaaliyaan lahaa qoysaskeena intii aannu iska jira 5. Masiix in uu noqon doono ...
September waxaan sii daayay filim gaaban oo album loo yaqaan “Man Up" si ay uga hortagaan in ragga dhallinyarada, dadku waxay ahaan. Halkan video music ee a “Man Up Heesta." Waxaad ka iibsan kartaa filim gaaban oo album halkan
Evangelist The Aamin
Halkan audio ka kalfadhi wax baan ku bari horaantii sanadkan ku saabsan wacdinta aamin. Evangelist The Aamin by BragOnMyLord Waayo, kuwa gaaban on time, halkan kooban qodobada: 5 Astaamaha u gaarka ah Evangelist a Aamin ... 1. Duuban tahay iyo Fahmaya Injiil 2. Isku kalsoon ahna Unashamed ee Injiilka 3. Jecelyahay Khasaaray ah 4. Ku xiran tahay Ilaah Natiijooyinka 5. Tukaday for Khasaaray iyo Fursadaha Share Rajaynaynaa waxaa fiican
Waayo, kuwa idinka mid ah oo aan waligay ma arag video for my song "duulaankii (Hero)" Halkan waa. Ku raaxayso! Waxaan rajeynayaa in aad ka caawisaa inay dhawraan wax indhihiinna on Masiix.
Shalay waxaan ka dhigay stop soo daahay habeenkii at dukaanka in ay la wareegaan dhawr waxyaalood oo waxaan lahaa wada hadal aad u xiiso badan iyadoo shaqaalaha dukaanka. Waxaana ka yeellay hadal yar sidii ay baadhayaan waxyaabaha aan, ka dibna waxay ii bixiyeen card dhimis laakiin waxaan iyada u sheegay xaaskeyga horay mid. Taasi waa marka wadahadalka helay xiiso leh. Waan ogahay hadalka this dhan aad si fiican sababtoo ah waxaan u haystay marar badan ka hor. Waxaa wax sidan oo kale ... Qofka: Waa maxay!? Waad guursaday? Me: Haa Waxaan la guursaday laba sano iyo bar la yaab leh. Person: Immisa jir ayaad tahay? Waxaad u eg ilmo. Me: Waxaan ahay saddex iyo labaatan,. Person: si dhallinyarada ah Waxaad tahay! Maxaad adduunka aad samayn lahayd in? Me: Waa maxay sababta ma uu doonaynin waxaan? In 2009, Waxaan guursaday jir ah oo kali ah sharciga iyo dirqi mudan ka mid ah intii labaatan sannadood jirtay. Intii aan saaxibo, hawlgelinta, iyo guurka gaaban, Waxaan ka codsaday waqti iyo waqti mar kale su'aalaha sida, "Maxay sababta la isu guursaday si dhallinyarada ah? Waa maxay cawdu?", oo aan jeclaa shakhsiyeed, "Waa in aad ku sugaynay iyo riyaaqay noloshaada!" Qaar ka mid ah dadka waawayn ee waydiinaya su'aalo kuwanu waxay ahaayeen shisheeyayaal, laakiin qaar ka mid ah ay ahaayeen qoyska. Oo waxaan waalan in guursaday ee noocan oo kale ah "da'da yar" da'da?...
Kasta oo hadda ka dibna waxaan dib u tag oo u dhagaystaan ​​albums oo songs in runtii suugaan ii dhaqaajin iyo ruuxa markaan iyaga maqlay. Mid ka mid ah albums kuwa waa Project Solus Christus The by Shai Linné. Waa mid ka mid ah aan albums hip hop jecel- muddo. wax soo saarka The waa mid gaar ah (in kastoo aan ganacsi), content waa mid cajiib ah, iyo xirfad lyrical Shai waa bandhigay buuxa. Tani waa mid ka mid ah kuwa albums ka dhigaya heesaa is weydiiyaan, "Waa maxay sababta aniga haddana weli mar kale raab ah?" Anigu ma aan soo qaadan karaa rikoorka oo dhan in this post, laakiin halkan mid ka mid ah Aayado aan jeclaa ka album ah. Waa aayadda shai ee ka "Check Mic 1,2": Ayuu siiyey nolosha sida madax furasho ah, Waxaan ahay Crore ah oo aan cayaaray Marka akhriya heesta Masiixa my, Wanka xaqa ah kuwa nalalka aan siraad Yaa kale laakiin Eebaha quruumaha Crore karaa nin sakhraan ah oo quruumaha u qoro xataa eray keliya is-ammaanida aan? erayadayda way taag- filneyn runtii in lagu qeexo Seed u nadiifsan ku Qaddarray Camal mucjisada At da'da laba iyo toban, uu madaxdii jir yaabeen aragtiyihii uu addeeco Waalidkiis, inkasta oo uu abuuray tuubooyinka dabayl ay run xilkeeda- oo ku fekereyaan kartaa Addoonkii ...
Sidee Debate Khaniisnimada waa in Tag
post wanaagsan ka Trevin Wax. Waxaan oo dhan ka this roonaado baran karaan, Kitaabka Qudduuska ah, hab naxariis http://bit.ly/oWNTno
Unashamed Australia Vidiyo
laba ka mid ah todobaad ka hor waxaan ka caajisaan qaaday iyo madax in dhinaca kale ee caalamka qaar ka mid ah dadka aan jeclaa. Tedashii, Pro, KB, Thi'sl, DJ PDogg, our Tababaraha safar Steadman, oo waxay ahaayeen waxaan madax in Australia si ay ugu adeegaan Ciise. Waxa aynu ku sameeyey waxaan laba toddobaad hoos ku qaatay hoos Safraan Brisbane, Melbourne, Perth, iyo Sydney. In kasta oo magaalooyinka aan ka mid ahaayeen xaflado badan oo ka bilowda 5,000-10,000 dadka dhallinyarada ah. riwaayado ka hor, waxaan u baxay inuu ka dugsiyada qaar ka mid ah oo iyaga lagu casuumay in ay ka soo shows the. Waxa aynu loo ogolaaday in la yidhaahdo at badan oo dugsiyada waxaa ku koobnayn (maxaa yeelay, waxay ahaayeen dugsiyada dawladda non-Christian), laakiin waxaan sameeyey fiican in la dhiiri geliyo ardayda iyo iyaga farta Masiix. At riwaayada ah, oo dhan shan naga mid ah ku dhuftay marxaladda sida mid buuq badan, markabka unashamed. Waxaan ruxay sida ugu fiican ee aannu awoodda marxaladaha kuwii isku dayay in ay noqon sida cad ee suurtogalka ah ee ku saabsan Injiil in noo guuro inay sameeyaan waxa aannu ku samayn. In ka badan wax aan doonayay waawayn in ay ogaadaan Ciise! Waxaan had iyo jeer isku dayaan in ay hubiso in dadka waawayn ka tago wacdaro, ma by xirfadaha our, laakiin by Rabbigeenna. Waxa aan la kulmay waxaan helay in ...
Video of Lecrae, Eric Mason, iyo Trip
Halkan video ah Lecrae, Eric Mason, oo ii hadlayaan hip hop iyo Injiil
Recent video Injiil Coalition of Eric Mason, Lecrae, oo ii hadlayaan waawayn madow iyo “edeb" fiqiga
daahyada la deggan yahay
The xaqa Aad Sad